အ ရိုင်းမေ လး – Hlataw.com
အ ရိုင်းမေ လး
မသံဇီ ဆိုတဲ့ လူကောင် ထွားထွား သကောင့်သားကလည်း ပါဒနိင်ငံဧ။် အရှင် မဖြစ်မည့် မင်းသမီး စောနန်းအား ကယ်တင် ဖို့ စေလွတ်လိုက်သည့်လူပေါင်းသုံးဆယ်…ဝါ…ကြောင်ရိုင်းသုံးဆယ်ထဲမှ တစ်ကောင်ပင်ဖြစ် သည်။သူဧ။်လမ်းကြောင်းအတိုင်း သတ်မှတ်နယ်မြေကို သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း အရောက်ချီတက် ထိုး ဖေါက်ဝင်လာသူ ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာ အရောက်မှာ နီဂရီ အရိုင်းမလေး ရေချိုးနေသည်ကို အမှတ်မထင်တွေ့ရှိရာမှ … သည်အ နီးတဝိုက် နီဂရီလူရိုင်း အုပ်စုတစ်စု ရှိနေပေမည်…သူမမှတဆင့် ခြေရာခံလိုက်နိင်ရန်အတွက်လဲ ပါသလို သဘာဝအတိုင်း ရေချိုးနေသည်ကို တပ်မက် စိတ်နဲ့ ငေးမောကြည့်ရှုနေခြင်းလည်း တ ပိုင်းပင် …။ ယခု…နီဂရီသူ..အန္တရယ်တွေ့နေပြီိ…မသံဇီ ဘာလုပ်ရမည်နည်း..ဝေခွဲမရ…နောက်ဆုတ် ရှောင် ကွင်းသွားရမည်လား… ဒုက္ခတွေ့နေသူကို ကူညီရမည်လား..မဆုံးဖြတ်နိင်ပဲ နီဂရီသူလေးကို ငေး ကြည့်နေမိလိုက်သည်။ နီဂရီ လူရိုင်းမကလေး ကမ်းစပ်နှင့် နီးကပ်လာသလို… မိ ချောင်းကလည်း လျှင်မြန်စွာ သူမနောက်မှ ကူးခပ်လိုက်ပါလာလေသည်.. ဝါးတစ်ထောက် အကွာ အဝေးပင် မရှိတော့ .. တိကျ ခိုင်မာစွာ မဆုံးဖြတ်နိင်ခင်မှာပဲ…မသံဇီလက်၌ တစ်ဘက်တစ်ချက်ဆီ ကိုင်ဆွဲထားသော… လှံရှည်နှင့် ဓါးအိတ်ကို လွတ်ချ လိုက်သည်။ ခါး၌ထိုးထားသော မိမိဧ။် အပိုင်နိင်ဆုံး ကိုင်တွယ်အ သုံး ပြုနေကျ..ဓါးမြှောင်ရှည်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ကမ်းထိပ်မှနေ ၍ လူရိုင်းမလေးနှင့် မိချောင်းကြား သို့ ဦးစိုက်ဂျွမ်းထိုး ချလိုက်သည် ။
ဗွမ်းကနဲ ရေလှိုင်းများ ထသွားသည်..အရိုင်းမလေး ပို၍ထိတ်လန့်ခါ အားကုန်ကူးခပ်လိုက် သလို.. ရေလုံးများက မျက်ကွယ်ပြု သဖြင့် မိချောင်းသည် တဒဂ် အရှိန်တန့်သွားသည်။ မသံဇီ ရေအောက် မှ အရှိန်ဖြင့်ငုတ်လျှိုး၍..မိချောင်းရှိရာသို့ ကူးခပ်သွားသည်။ မိချောင်း ဝမ်းဗိုက်အောက် အရောက် ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။ မိချောင်းရဲ့ လည်ပင်းကိုဖက်တွယ်လိုက်ပြီး..ဓါးမြောင်ဖြင့်ပင် မိချောင်း ဧ။် ဝမ်းဗိုက်ကိုပင် ထိုးလိုက်သည်။ စွပ်..ကနဲ ဓါးမြောင် အဆုံးထိနှစ်ဝင် သွားရသလို..လူမှာလည်း ရမ်းခါသွားသဖြင့် မိချောင်းဧ။် လည်ပင်းကို ပို၍တင်းကြပ်စွား ဖက်တွယ်ထားလိုက်သည်။ ဝဲဂရက်ထ လှုပ်ရှားနေသော ရေပြင်ထက် နီရဲသော သွေးများ ဖျာ၍တက်လာသည်ကို ကုန်းပေါ်မှ စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် စောင့် ကြည့်နေသည့် ..လူရိုင်းမလေး မြင်တွေ့လိုက်ရတော့ ပါးစပ်ကလေး ‘ဝ’ လုံး သဏ္ဌာန်လုံးဝန်း ဟသွားသည်။ မိမိဧ။် အသက်အန္တရယ်ကို ဝင်ရောက်ယ်တင်သူ မည်သူဖြစ်သနည်း ..သူအန္တရယ် ကင်းမှ ကင်းပါလေစ …။ ဟော…သွေးတွေ..လှိုင်းထလှုပ်ခါနေတဲ့ ရေတွေနဲ့အတူ ရေမျက်နာပြင်ပေါ်မှာ..အနီရောင် ဆိုး လိုက်ပြန်ပြီ ။ လူသားသွေးလား.. မိချောင်းသွေးလား..ဝေခွဲမရ…စိုးရိမ်ကြောင့်ကြဟန်ဖြင့် ငေးမော ရပ်တန့်နေပုံမှာ…ဆည်းဆာရဲ့ နေရောင်အောက်မှာ..လှချင်တိုင်း လှနေတဲ့ အရိုင်းမလေး…အရပ်အမောင်းက မနိမ့်မမြင့် ခန္ဒာကိုယ် မဆူလွန်း မကြုံ့လွန်း..မျက်နာသွယ်သွယ် နှာတံပေါ်ပေါ်.. ကြည်လင် ဝိုင်းစက်နေသည့် မျက်ဝန်း..ပိပြားသေသပ်သည့် နုတ်ခန်းနှစ်လွှာလေးက ပွင့်ဖူးစ နှင်းဆီ ငုံဖူးပမာ နီရဲတောက်ပနေ ဧ။် ။ လုံးဝန်းစုချွန်နေတဲ့ သူမပိုင်..ရင်နှစ်မွှာ ဟာ ငေါငေါကြီးရှေ့သို့ စူထွက်၍ တုန် ခါနေသည် ..ဇီးစေ့ပမာ နီရဲနေတဲ့ နိ့သီးခေါင်းလေး နှစ်ဖက်မှာ…ရေစက်များ ရီးလေးခိုနေ ဆဲ ….။ ပြေလျောနှိမ့်ဝင်သွားတဲ့..ဝမ်းပြင်သားချပ်ချပ်ကလေး အောက်မှာတော့ ပြည့်တင်းဖြောင့်တန်း နေတဲ့ ပေါင်တန်ကြီးများက အရှက် လုံရုံ ..ပတ်ချည်ထားသော သမင်ရေစ အောက်ကနေ ကုန်းရုန်းထ တော့မယောင်…ဖြိုးဖြိုးပြည့်ပြည့် ရှိလွန်းလှသည်။
သေးကျင်ပြီး ခန့်ထည်သည့် ခါးအောက်တင် ပါးကြီးများကလည်း စွင့်ကားပြည့်တင်းလွန်းလှဧ။်…။ တောင်ပေါ် တောင်အောက် အတက်အဆင်း များလွန်းရော့ထင့် ….ခြေသလုံးသားများ ကလည်း တုတ်ခိုင်ပြည့်တင်းနေဧ။် …. လှုပ်ခပ်နေသည့် ရေပြင်ဟာ .. တခဏအတွင်းမှာ ငြိမ်သက်သွားသည် … နောက် ရေပေါ်သို့ မိချောင်းသဏ္ဌာန် တစ်ခုပေါ်လာ သည် …. ”ဟော … မိချောင်း ….” အရိုင်းမလေး နုတ်ဖျာမှ..ဝမ်းသာအားရ ကြွေးကြော်လိုက်သည် ။ မိချောင်းမှာ ရေပေါ်သို့ ပက် လက်လှန်ပြီး ပေါ်လာကာ ဝမ်း ဗိုက်ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေသည်ကို မြင်လိုက်ရပြန်သည်။ ရေစီး အားနဲ့ မိချောင်း တစ်ပတ်လည်သွားပြီး မှောက်လျက် အနေအထား ဖြစ်သွားကာ အောက်နား ကမ်းစပ်ဆီ မျှောပါသွားသလို..သည်ဘက် ကမ်းစပ်ဆီသို့ လူတစ်ယောက် ဘွားကနဲ ပေါ်လာဧ။် မသံဇီ အသက်ကို အားပါးတရ ရှုလိုက်ပြီး ကမ်းစပ်ဆီ လှမ်းတက်လာသည် ။ ဆံပင်စုတ်ဖွားဖြင့် ဆိုတော့ မည်သူမှန်း မသိသေး… မိမိမျိုးနွယ်စုထဲကလူ မဟုတ်မှန်းတော့ အရိုင်းမလေး အတတ် သိလိုက်သည်။ ကမ်းစပ် သဲသောင်ပြင်ပေါ်သို့ ဒရိန်းဒရိုင်ဖြင့် တစ်လှမ်းခြင်း လှမ်းတက်လာသည့်သူ ကမ်းစပ် သောင်ပြင်ပေါ် အရောက်မှာ .. ဒူးထောက်ပြီး ခဏ မှောက်လျက် လဲကျသွားသည် ။ ”အိုး..ကြည့်…သူ့နောက်ကျောမှာ မိချောင်း ကုတ်မိတဲ့ လက်သည်းရာ အစင်းကြောင်း ..သုံးလေး ခု သွေးတွေ ချင်းချင်းနီရဲ နေ ပါရော့လား … ” အရိုင်းမလေး တီးတိုးရေရွတ်ရင်း…ကမူထိပ်မှ ပြေးဆင်းလာသည်။ တစ်ကိုယ်လုံး ရမ်းခါကုန် သည်…ရင်တွေ..တင်တွေ..ခြေ လှမ်းလိုက်တိုင်း လှမ်းလိုက်တိုင်း တုန်ခါလှုပ်ရမ်းနေကြသည်။ သူမ မသံဇီ အနားရောက်..ဒူးနှစ်ဖက်ထောက်ပြီး…သွေးတွေ စို့ ထွက်နေတဲ့ ဒါဏ်ရာကို လက်ချောင်း သွယ်သွယ်လေးတစ်ဖက်နဲ့ အသာ အယာ ..ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည် … ။
မသံဇီ တစ်ချက် တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသလို … နုတ်မှလည်း တကျွတ်ကျွတ်နဲ့ စုပ်ထိုးလိုက်ရပြန သည် ။ အရိုင်းမကလေး သုတ် ကနဲ ဒူးထောက်ထိုင်နေရာမှ ..ထပြေးသွားသည် …ချောင်းနှင့်မ လှမ်းမကမ်း တောထဲသို့…။ တခဏအတွင်း အရိုင်းမကလေး တာထဲမှာ ပြန်ပြေးထွက်လာ သည် ..လက်ထဲမှာ ဝါးကျည်တောက် နှစ်လုံးကိုင်ဆွဲလာသည် … မှောက်လျက် ရှိနေသည့် မသံဇီ အနားမှာ ဒူနှစ်ဖက်ထောက်လိုက်ပြီး…ဝါးကျည်တောက် တစ်ခုထဲမှာ ပျစ်ချွဲစေးထန်းသည့် အနီ ရောင် အရည်များဖြင့် လက်သည်း ရာများပေါ်တွင် လောင်းချလိုက်သည်။ ”အား …. ရှီး … ကျွတ် … ကျွတ် ..” မသံဇီ နုတ်ဖျားမှ အသံထွက် ညည်းငြူလိုက်သလို ကျောကိုလည်း တွန့်လိမ်ပြစ်လိုက်သည် ။ အ ရိုင်းမလေး နုတ်ခမ်းထောင့် စွန်းမှာ…အပြုံးရိပ်ကလေး တစ်ချက် ထင်ဟပ်လာပြီး…မသံဇီဧ။် ကျော လက်ပြင်နှစ်ခုကြားကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဖိထားလို က်ပြန်သည်။ ပြီး…ဝါးကျည်ထောက် တစ်ခုထဲ မှာ သစ်မြစ်နှင့် သစ်ရွက်တချို့ကို ထုတ်ယူခါ…သူမဧ။် ပါးစပ်ကလေးထဲသို့ ပစ်ထည့်ဝါးလိုက်ဧ။် … အတန်ကြာမျှဝါးပြီး အဖတ်များကို မိချောင်းကုတ်ခြစ်လိုက်သော မသံဇီဧ။် အနာများပေါ်သို့ တယု တယ လိမ်းကျံပေးလိုက်သည်။ နွေးကနဲ နေရာမှ အေးသွားပြီး အနာမှာ စပ်ဖျင်းနာကျင်သော ဝေဒနာများမှာ နေလာနှင်းပျောက် ဆိုသလို သက်သာ သွားလေတော့ သည်။
အရိုင်းမလေး…မသံဇီဧ။် အနာတဝိုက်ကို ပွတ်သပ်ပေး လိုက်ပြန်သည် ။ အတန်ကြာ မသံဇီ အနာသက်သာ သွားသလို.. အမောများ ပြေပျောက်သွားပြီမို့ လေးဖက် ကုန်းရုန်းထလိုက်ပြီး …အနားရှိ ကျောက်တုံးလေး တစ်တုံးပေါ် ဖင်ခုထိုင်လိုက်သည်။ အရိုင်းမလေး ပြုံးရွင်စွာဖြင့် မသံဇီ အနားတိုးကပ်လာခါ…ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သည်…လက်ထဲမှ ဝါးကျည်ထောက်ကို …ထိုးပေး လိုက်ပြီး မော့သောက်ဟန် ပြလိုက်သည် …. မသံဇီ ယောင်ယောင်အမှားမှားဖြင့် ဝါးကျည်တောက်ကိုလှမ်း ယူလိုက်ပြီး …အရိုင်းမလေးကို စူး စိုက်ကြည့်လိုက်သည်…နိ့ဘတ် လတ်ကြီးဖြင့် ဆည်းဆာ နေရောင်အောက်မှာ တမျိုးလေးကြည့် လို့ လှလွန်းစွ …ဘယ်အချိန်က ဆွဲလိုက်မှန်းမသိ…လည်ပင်း မှာ ဝက်စွယ်များဖြင့် သီကုံးထား သော ပုတီးကုံးတစ်ခု ဆွဲထားသည်မှာ..ကျော့ရှင်းသည့် လည်တိုင်အား အလှတိုးစေနေပြန် သည်။ အသက်ရှုလိုက်တိုင်း သူမရဲ့ ရင်နှစ်မွှာ လှိုင်ထ၍ တုန်ခါနေပြန်သည် ..ဒူးနှစ်ဖက်ပေါ် လက်က လေး ထောက်၍ မော့ကြည့်နေ သည်။ မျက်လုံးများ အရည်များဖြင့် တောက်ပနေသလို ..မဟတ ဟလေး ပြုံးချိုမြမြ နုတ်ခမ်းဝ ကလေးများကလည်း နီရဲစိုစွတ်နေ သည်ကို မသံဇီ တဒဂ် ငေးမော ကြည့်ရင်း ဝါးကျည်တောက်ကို မော့သောက်လိုက်သည်။ ပူနွေးချိုမြိန်သော အရသာနှင့် အတူ လည်ချောင်းတလျောက် ..ပူဆင်းသွားသလို အမောတကော မော့သောက်လိုက်သည်မို့ … အရည်များ သီးကုန်ဧ။် …. ”အား …. အဟွတ် … ဟွတ်” ”ခစ်….ခစ်….. ခစ် … ဟီ ဟိ” အရည်များ သီးပြီးချောင်းတဟွတ်ဟွတ် ဖြစ်နေသော မသံဇီရဲ့ အဖြစ်ကို အရိုင်းမလေး သဘောကျ ရော့ ထင့်..တခစ်ခစ်တဟိဟိ ရယ်မောနေသည်မှ ပကတိ အပြစ်ကင်းစင်လွန်းလှဧ။် …. မသံဇီ…ဝါးကျည်တောက်ထဲမှ အရည်များသည် စိမ်ရည်ဖြစ်ကြောင်း သိသွားသဖြင့် .. ဖြည်းဖြည်း ခြင်း ..မျှင်း၍ သောက်ရင်းမှ အရိုင်းမလေးဧ။် လှုပ်ရှားဟန်ကို စူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြန်သည် ..။
အရိုင်းမလေး သူ့ကို မော့ကြည့်ရင်းမှ သူမဆွဲထားသော ဝက်စွယ်ပုတီးကုံးလေးကို ဖြုတ်လိုက်သည် .. ပြီးတော့ …မသံဇီအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကမ်းပေးလိုက်သည် ။ ခဏမျှ မသံဇီ အံ့အားသင့်သလို တွေဝေနေရာမှ..သဘောပေါက်လိုက်သည်နှင့် ..ဝါးကျည် တောက်ကို သောင်ပြင်ပေါ်မှာ မ လဲအောင် ထောင်ထားလိုက်ခါ..ကျောက်တုံးပေါ်မှ ဆင်းပြီး အရိုင်းမလေးနှင့် မျက်နာခြင်းဆိုင် ဒူးတိုက်အနေထားဖြင့် ထိုင် လိုက်ပြီး ခေါင်းကိုငုံ့ပေးလိုက်သည် … အရိုင်းမလး အူမြူးသွားသည်…ဝမ်းသာအားရဖြင့်..မသံဇီအား ပုတီးကုံးကို ခေါင်းမှ စွပ်ပေးလိုက် သည် ။ တဒဂ် တစ်ယောက် မျက်နာ တစ်ယောက် ငေးစိုက်ကြည့်နေရင်းမှ လက်များကို ဆုပ်ကိုင် ဖြစ်ညစ်လိုက်ကြသည်။ မသံဇီ သောင်ပြင်ပေါ် ဖင်ချထိုင် လိုက်သည်…အရိုင်းမလေး တအိအိနှင့် သူဧ။် ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးထဲသို့ လဲပြိုကျလာသည်။ အလိုက်သင့် ပွေ့ဖက်လိုက်ပြီး…အနမ်းမိုးများ…ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် ..အရိုင်းမလေးဧ။် ပါးများပေါ် သို့ အဆက်မပြတ် ရွာချ လိုက်လေတော့ဧ။် ။ အသက်ကယ်ရင်…အသက်ပိုင်တယ်..ဆိုတဲ့..ဓလေ့ထုံးတမ်းလေးတစ်ခု မည်သူက စတင်လိုက် သည်မသိ…ယဉ်ကျေးနေပြီဖြစ် တဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေကြားမှာ အမြစ်တွယ်နေဆဲမို့..အရိုင်းမလေး မသံ ဇီကို မိမိဧ။် အသက်သခင်..ဝါ..သက်ဦးဆံပိုင် အရှင်သခင် အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ကြင်နာမှုတွေ ပေး ဆပ်မှုတွေ တနင့်တပိုးဖြင့် မသံဇီအား ပြုစုနေပြန်သည်။ ပူနွေးရှတတဲ့ အနမ်းတွေနဲ့အတူ မြွေလိုရစ်ပတ် ပွတ်သပ်နေမှုကလည်း အရိုင်းမလေး သွေးတိုး ဆူဝေ စေပြန်သည်။
မသံဇီ အစောက သောက်လိုက်ရသော စိမ်ရည်ဧ။် တန်ခိုးကြောင့် နှလုံး သွေးခုန်မြန်လာသလို ခေါင်းတစ်ခုလုံး ရီဝေမူးနောက်နေမှုနဲ့ အတူ….။ နူးညံ့အိထွေးသော အရိုင်း မလေးဧ။် ခန္ဓာကိုယ်မှ အထိတွေ့တွေက ရာဂသွေးကို မြှင့်တင်ပေးနေသည်မို့… သူမဧ။် နှင်ဆီငုံဖူးပမာ နီတျာတျာ နှုတ်ခမ်းလွှာလေးကို ဖိကပ်နမ်းစုပ်လိုက်သလို လက်တစ် ဖက်ကလည်း သူမဧ။် ပြည့်တင်း စုချွန် တုန်ခါနေတဲ့ နိ့လေးများကို ပွတ်သပ်ဆုပ်ချေ ပေးလိုက် သည်။ အရိုင်းမလေး ကျောကော့၍သွားဧ။်။ သူမဧ။် လက်လေးနှစ်ဖက်ကလည်း မသံဇီဧ။် ခါးကို တင်းကျပ်စွာ ပြန်လှန်ဖက်တွယ် ပြစ်လိုက်ဧ။်။ မသံဇီ နီဂရိ အရိုင်းမလေးကို သဲသောင်ပြင်ပေါ်သို့ လှဲချလိုက်ပြီး …သူမဧ။်ဘေးမှ လှဲလျောင်းချ လိုက်ရင်း..နို့လေးများကို တစ် လှဲ့စီ ငုံခဲစို့လိုက်ပြန်သည်။ ဇီးကင်းစေ့ ပမာဏလောက်ရှိတဲ့ နီ တျာရဲ နို့သီးခေါင်းလေးကို သွားလေးများဖြင့် မနာ့တနာ ဖိကိုက် လိုက်သလို ကျန်နို့တစ်ဖက် ကိုလည်း လက်ချောင်းကြားမှာ ဖိချေပွတ်သပ်လိုက်တော့ အရိုင်းမလေး လူးလွန့် လှုပ်ရှားရင်း … ”ဟင်း…ဟင့်… . ဟ …. ဟီး …. ဟင့် …. အင်း ….” ရာဂစိတ်တွေ တစ်ကိုယ်လုံး တရှိန်းရှိန်း တဖိန်းဖိန်းတက်လာခါ နှုတ်ဖျားမှ တဟင်းဟင်း ငြီးငြူ နေရှာဧ။် ။ မသံဇီ သူမဧ။် သေး သွယ်သော ခါးမှ သရေနွယ်ကြိုးကို ဖြုတ်ချလိုက်သဖြင့် အရက်လုံရုံ ပတ်ထားသော ခါးမှ သားရေချပ်ကလေး သောင်ပြင်ပေါ် ပြုတ်ကျသွားရပြန်သည်။ ပြည့်ဖြိုးလုံးဝန်း ဖြောင့်တန်းတဲ့ ပေါင်တန်ကြီးများနှစ်ဖက်ကြားမှ မဲနက်တောက်ပြောင်နေသော စောက်မွှေးများဖြင့် ခြံရံလျက် ဖါးခုံ ညှင်းပမာ စောက်ဖုတ်ကလေးကို လက်ဖြင့် ဖွဖွရွရွလေး ပွတ် သပ်ပေးသလို ကောက်ကွေးမဲနက်တဲ့ စောက်မွှေးလေးများကို တင်း ကနဲနေအောင် ဆုပ်ဆွဲလိုက် သည်။
”အိုး ….အဟင့် …. ဟင်း …ဟင်း..” အရိုင်းမလေး ဖင်လေးယမ်းခါ သွားရပြန်သည်။ ရေးရေးမျှထင်နေသော အကွဲကြောင်းတစ် လျောက် လက်ချောင်း (လက်ခလယ် ) ဖြင့် ထက်အောက် ပွတ်သပ်ပေးပြီး သူမဧ။် စောက်ခေါင်း လေးထဲသို့ ထိုးထဲ့မွှေနှောက်ပစ်လိုက်သည်။ ”ပြလွတ် …စွိ…စွိ…အီး….ဟင်း ….ဟင်း..ဟင်း” ဖင်လေး ကော့တက်လာသည်..သွယ်လျတဲ့ လက်ချောင်းလေးများကလည်း မသံဇီဧ။် ခေါင်းကို ဆံ ပင်များမှ ဆုပ်ကိုင်ခါယမ်း ပစ် လိုက်ရသည်အထိ …ယားသလိုလိုနဲ့ အခံရခက်လွန်းလှသည်။ သူမ ဧ။် တစ်ကိုယ်လုံး ပူနွေးလာသလို အသက်ရူသံများ မြန် ဆန်လာဧ။် ။မျက်ဝန်းနက်လေး အစုံက လည်း အရောင်များ ရွှန်းပျက် တောက်ပလာပြန်သည်။ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဘေးသို့ အစွမ်းကုန် ဖြဲကားပြစ်လိုက်သည် ။ ရင်နှစ်မွှာကြားမှ မသံဇီဧ။် ခေါင်းကို ဆွဲကိုင်ပွတ်သပ်နေမိပြန်ဧ။် ။ မသံဇီ ဘေးတစ်စောင်းလှဲနေရာမှ ထထိုင်လိုက်ပြီး ခါးမှ သင်တိုင်းကို ချွတ်လိုက်သော် အကြောများ အပြိုင်းအရိုင်းနဲ့ မာထန်နေ သောလီးကြီးမှာ ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲ ခေါင်းထောင်ထလာသည်ကို အရိုင်းမလေး မြင်လိုက်ရတော့ ဝိုင်းသွားပြန်ပြီ … ဝ လုံး လေးလို သူမ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာ ….။ ”အို …” တစ်ခွန်းထဲပါဘဲ….ရေရွတ်ခါ မျက်လုံးကို စုံမှိတ်ပစ်လိုက်သလို ခေါင်းကိုလည်း တစ်ဘက်သို့ လှဲ့ လိုက်ပေဧ။်။ မသံဇီ အလိုက် သင့်ဖြဲကားနေတဲ့ သူမဧ။် ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက် သည်။ သူမဧ။် ပြည့်တင်းဖြောင့်စင်းသည့် ပေါင်များကို မိမိဧ။် ပေါင်နှစ်ဘက်ပေါ်သို့ တစ်ဘက် တစ်ချက် ဆွဲတင်လိုက်သည်။
ထန်နေတဲ့ လီးကြီးကို အရင်းမှ ကိုင်လိုက်သည် ..လက်တစ် ဘက်က သူမဧ။်ဆီးခုံပေါ် အသာ အယာဖိထောက်ခါ လီးထိပ် ကွမ်းသီးခေါင်းကြီးဖြင့် သူမဧ။် စောက်ခေါင်းဝတွင်တေ့၍ ထက် အောက် ဘယ်ညာ မွှေနှောက်ပေးလိုက်သလို…လီးဖြင့်လည်း သူ မ ဧ။် အဖုတ်ကလေးကို ရိုက်ခတ်ပေးလိုက်သည်။ ”ဗုတ် …ဗုတ်…အင့် ..ဟင်း ..ဟင်းဟင်း” အရိုင်းမလေး အဖျားတွေအရမ်း အရမ်းတက်သွားရလေပြန်ဧ။်။ ဝင်းဝါစိုပြေသော မျက်နာလေးမှာ ကာမသွေးတို့ ဆူကြွရဲရဲနီလေပြီ။ မသံဇီ …သူဧ။်လီးထိပ် ကွမ်းသီးခေါင်းကြီးကို အရိုင်းမလေးဧ။် စောက်ခေါင်းထဲ နစ်ဝင်အောင် ဖိ သွင်းလိုက်ဧ။်။ ”ပြလွတ်..ကနဲ မြည်သံနဲ့အတူ လီးထိပ်ကွမ်းသီးခေါင်းမှာ အဖုတ်ကလေးထဲသို့ ကျွံ ကျနှစ်ဝင်သွားသလို အရိုင်းမလေးခမျာ အသဲတွေလှိုက်ကနဲ ဖြစ်ကာ လေဝင်ဟပ်သလို မဝေခွဲ နိင်တဲ့ခံစားမှု တစ်ရပ်နဲ့အတူ ခါးလေးတစ်ချက် တွန့်သွားသည်။ မသံဇီ..သူမဧ။် ခါးလေးကိုလက်တစ်ဘက်နဲ့ပွေ့ဆွဲယူလိုက်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဘက်ကလဲ သူမဧ။် ကျောအောက်မှ လက်လျှိုသွင်းခါ ပုခုံးစွန်းလေးကို ကိုင်ဆွဲလိုက်သည်။ အားလုံး ချိန်ကိုက်အနေအထားရောက်ပြီဆိုမှ …ခါးအားကို နွဲ့ယူလိုက်ခါ ဖိသိပ်လိုက်ပြန် ဧ။် ။ ”ဗြစ်..ဗြစ်…ဗြစ် … အ …အ…အား..” တုတ်ခိုင်ကြီးထွားလှသော မသံဇီဧ။် လီးကြီးမှာ အရိုင်းမလေးဧ။် အဖုတ်ကလေးထဲသို့ တစ်စတစ် စ ထိုးခွဲဝင်ရောက်နေသည် မှာ တဗြစ်ဗြစ်အသံများ မြည်နေသလို အရိုင်းမလေးမှာလည်း မိမိအ ဖုတ် အတွင်းကို တုတ်တစ်ချောင်းဖြင့် သပ်လျှိုရိုက်သလို ပြည့်သိပ်ကျပ်တည်းစွာ တရွေ့ရွေ့ တိုး ဝင်လာတဲ့ လီးကြီးဧ။် ဒါဏ်ကြောင့် မချိမဆန့်အောင် ခံစားလာရသဖြင့် မသံဇီဧ။် ရင် ဘတ်ကြီးကို လက်ကလေးအစုံဖြင့် ဆီးတွန်းရင်းရုန်းဖယ်လိုက်ဧ။်။ မသံဇီ..ဖိသွင်းနေမှုကို ခဏမျှ ရပ်တန့်၍ သူမဧ။် တုံခတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိကပ် နမ်းစုပ်လိုက်ပြန်သည်။
သူမဧ။် တင်ပါးကြီးများမှာလည်း သဲသောင်ပြင်ထဲ၌ အိကျနှစ်ဝင်မတတ် ပိ ပြားနေသလို ခြေထောက်နှစ်ချောင်းမှာလည်း ရမ်းခါနေပြန်ဧ။်။ စုချွန်မို့မောက်နေတဲ့ သူမရဲ့ ရွှေရင် ဖြိုးဖြိုးတွေကို သာတစ်ခါ ..နာတစ်လှဲ့ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညစ် နယ်ဖတ်ပြစ်လိုက်ပြန်ဧ။် ။ ချပ်ကပ် နေ သည့် ဝမ်းပျဉ်းသားလေးကို ဖွဖွရွရွလေး ပွတ်သပ်ပေးနေရာမှ တဖြေးဖြေးနဲ့ပြည့်ဖြိုးဖြောင့်စင်းနေ သော ပေါင်တန်ကို ထက် အောက် စုံဆန်ပွတ်သပ်ပေးသလို မိမိဧ။် လီးကြီး သုံးပုံတစ်ပုံခန့် နှစ်ဝင် နေသော အရိုင်းမလေးဧ။် အဖုတ်နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်ကို ပါ လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ပွတ်သပ်ခါ မဲ နက် ကွေးကောက်နေသော စောက်မွှေးများကို ဆုပ်ဆွဲလိုက် …ပွတ်လိုက်လုပ်ပေး လိုက် တော့ သည်။ အရိုင်းမလေး တွန့်ထိုးရုန်းကန်နေမှုများ ငြိမ်သက်သွားသလို ခြေနှစ်ချောင်းကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကား မြှောက်တင်လိုက်ဧ။် … နှုတ်ဖျားမှလည်း … ”အင်း …ဟင်းဟင်း .. အိုး…ရှီး..” ငြီးငြူမှုနဲ့အတူ သူမဧ။် စောက်ခေါင်းအတွင်းသား နံရံများကလည်း ရှုံ့ပွရှုံ့ပွဖြစ်လာခါ အရည်များ ကို တစိမ့်စိမ့် ယိုထွက်ကျလာ ကုန်ဧ။် ။ ဆက်ရန် မသံဇီ…သုံးပုံ တစ်ပုံခန့် ဝင်နေသော မိမိဧ။် လီးကြီးကို …ဒစ်ဖျားကျန်ရုံလေး အသာဆွဲချွတ်လိုက် သည်။ နောက်…. အားဖြင့် ဇတ်ကနဲ ဖိသိပ်လိုက်ပြန်သည်။
”ဗြစ် . . ဗြစ် . .ဒုတ် . . အား … အီး .. အီး .. ရှီး …ကျွတ် ..ကျွတ် .. အင်း .. ဟင်းဟင်း” အရည်များဖြင့် စိုစွတ်ရွှဲအိနေသဖြင့် ဒီတစ်ချီ ဖိအသိပ်မှာ လီးကြီးတစ်ဆုံးထိ နစ်ဝင်သွားရသလို ဒစ်ဖျားက အရိုင်းမလေးဧ။် အသားအိမ်ကို သွားထိမိလိုက်ရာ ….အရိုင်းမလေး ဖျတ်ဖျတ်လူး ငြီးငြူ တွန့်လိမ်ရုန်းကန် မိရပြန်ဧ။်။ ပူကနဲ ဝင်လာသော လီးအရသာကို ပထမဆုံး ခံစားလိုက်ရပြန်သဖြင့် အရိုင်းမလေး အသဲရော အူပါ ပြုတ်ထွက်ကုန်ပလား ဟု ထင်မှတ်ရလောက်အောင် ကာမအရသာကို တွေ့ထိခံစားလာလေ သည်။ ပွတ်သပ် ချော့မြူနေရင်းမှ မသံဇီ…လီးကြီး ကို ဒစ်ဖျားကျန်ရုံလေး အသာနှဲ့ချွတ်လိုက်ဧ။် … ပြီးနောက် အားကုန်ဖိဆောင့်လိုးချ လိုက်လေသည် ။ ”စွတ် …ဗျစ် .. ဗျစ် ..စွပ် ..စွတ် ..ဒုတ်” ”အင်း .. ဟင်း ..ဟင်း …အင်း … ရှီး .. အား … ကျွတ် ..ကျွတ် …အိုး ..” အရည်ကြည်များဖြင့် စွတ်စိုနေပြီ ဖြစ်သဖြင့် အတားဆီးမဲ့ စူးနစ်စွာ အဆုံးထိ ဝင်ရောက်လာသော လီးကြီးမှာ လုံးပတ်အတန် ငယ် ကြီးမားနေရာ အရိုင်းမလေးဧ။် စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံး ပြည့်ကြပ် တင်းကျင် သွားမိသည်မို့ တစ်ခါဘူးမျှ အလိုးမခံဘူးသော အရိုင်းမလေးမှာ အသဲခိုက်မျှ အော်ဟစ် မိလိုက်ပြန်သည်။ မသံဇီ…မလျှော့တော့ အဆက်မပြတ် ဖိဆောင့်လိုးနေ လိုက်သည်မှာ ဒလစပ် မြန်ဆန်သွက် လက် လွန်းလှဘိသည်။ တစ်ခါ ဘူးမျှ မလိုးဘူးသည့် မသံဇီနှင့် တစ်ခါဘူးမျှ အလိုးမခံဘူးသေး သော အရိုင်းမလေးတို့နှစ်ယောက် စပ်ဖျင်းနာကျင်မှုနဲ့အတူ ထူးခြားကောင်းအီသော အရသာ ကို စတင်ခံစား လာရပြီမို့ မနားတမ်း လိုးဆောင့်နေသလို အရိုင်းမလေးမှာလဲ အောက်မှနေ၍ အံ ကလေးကြိတ်ခါ ဖင်တုန်ကြီးများကို ကော့မြှောက်ပင့်တင် ပေးနေလိုက်ပြန်ဧ။် ။
”ဗြစ်..စွိ..စွတ်..ဒုတ်…ပြလွတ်..ပြွတ် …ဒုတ်” ”အာ့…အ …အီး…အိုး….အင့်..အင့်..အင့်…” ဖိသိပ်ပွတ်ချေ လှုပ်ရမ်းနေမှုကြောင့် နှစ်ဦးစလုံးဧ။် လိင်အင်္ဂါများ ပူထူရှိန်းဖိန်းပြီး မထိန်းနိင် မသိမ်း နိင်ဘဲ ပထမဆုံး အချီကို မကြာ မတင်မှာဘဲ သုတ်ရည်များကို ပြိုင်တူပန်းထုတ် မိလိုက်ကြရင်းမှ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တင်းကျပ်စွာ ဖက်ပစ်လိုက်လေပြန်တော့ဧ။်။ ဝင်းဝါစိုပြေသော အရိုင်းမလေးဧ၊် မျက်နာမှာ ကျေနပ်သော အားရသော ပီတိတစ်ရပ်နဲ့အတူ သက်ပြင်းမောလေး ရှိုက်ထုတ် လိုက်ပြန်သည်။ ပူနွေးသော အရိုင်းမလေးဧ၊် အသက်ပြန်လေသည် မသံဇီဧ၊် မျက်နာကို ရှိုက်တို့၏ထိနေဧ၊်။ မသံဇီ အရိုင်းမလေး ၏ မျက်နာကို စေ့စေ့ကြည့်ရင်းမှ သူ မ၏ ချစ်စဖွယ် မျက်နာပြင်ပေါ်က ဇောချွေးလေးများကို တယုတယ ပွတ်သပ်သုတ်သင်ပေး လိုက် ပြီး နှင်းဆီသွေးရောင် ဖူးဖူးရွရွ နှုတ်ခမ်းလေးကို မိမိပါးစပ်ဖြင့် ငုံခဲစုပ်ယူလိုက်သည်။ အရိုင်းမလေးကလည်း မသံဇီ၏ ဂုတ်ပိုးကို ဖက်တွယ်ရင်းမှ တုန့်ပြန်နမ်းရှိုက် လိုက်၏။ မသံဇီ၏ လက်များကလည်း အငြမ် မနေတော့ပါ…အရိုင်းမလေး၏ တောင်ပူစာလေး နှစ်လုံးနှယ် စုချွန်မတ် ထောင်နေတဲ့ နိ့လေးတွေကို ဆုပ်ချေနယ်ဖတ် နေသည်။ အရိုင်းမလေး…မသံဇီ၏ ချိုမြိန်ရှတပူနွေးသော အနမ်းများကြောင့် တဒဂ် ငုတ်လျှိုးနေတဲ့ ကာမ ဆန္ဒများ မီးတောင်ပေါက်သလို တဖွားဖွား လွင့်ပြန့်လာသည်။
ထို့အတူပင် မသံဇီလည်း အရိုင်းမ လေး၏ တုံန့်ပြန်ယုယမှုကြောင့် သူမ၏ အဖုတ်လေးထဲမှာ မချွတ်ဘဲစိမ်ထားတဲ့ လီးမှာလည်း တစ် စတစ်စ ပြော့ခွေနေရာမှ မာထန်လာသည်မှာ အရိုင်းမလေး၏ အဖုတ်တွင်း တစ်လျှောက် ပြည့် သိပ်၍ပင် နေတော့သည်။ မသံဇီ..မှောက်လျက်ရှိနေရာမှ ဒူးထောက်ခါ နောက်တစ်မျိုးတစ်ဖုံ လုပ်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေဆဲ အရိုင်းမလေး သဲသောင်ပြင်ကို ဖနှေင့်ဖြင့်ဖိတွန်း လိုက်သည်။ သူမ၏ကိုယ်လေး လျှောကနဲ မသံဇီ ၏ အနားမှ ရှေ့သို့တွားသွားသည်…လီးကြီးမှာလည်း သူမ ၏ အဖုတ်လေးထဲမှ ပြလွတ်…ဗွတ် … ဆိုသည့် မြည်သံနဲ့အတူ ကျွတ်လွတ် ထွက်သွားရပြန်သည်။ အရိုင်းမလေး လူးလဲထ လိုက်သည်။ သောင်ပြင်ပေါ်၌ ထောင်ထားသော ဝါးကျည်တောက်ကို လှမ်းယူ၍ တစ်ငုံနှစ်ငုံမျှ စိမ်ရေကို မော့ သောက်လိုက်၏။ သူမ၏ ဝတ်လစ်စလစ် အနေအထားဖြင့် လှုပ်ရှားနေပုံမှာ တစ်မျိုးကြည့်ကောင်းနေသဖြင့် မသံဇီ တစ်ခွန်းမျှ စကားမဟဖြစ်ဘဲ ငေးမောကြည့်ရှုနေလိုက်၏။ နေဘယ်အချိန်က ဝင်သွားပြီး …လ ထွက်လာ သည်ပင် သတိမမူမိ…ယခုမှပင် မသံဇီ ပတ်ဝန်း ကျင်ကို သတိထားလိုက်မိ၏။ ပတ်ဝန်း ကျင်၌ ပိုးပရစ်တို့မြည်သံမှ အပ ပကတိတိတ်ဆိတ်နေသည်ကို သတိထားလိုက်မိသည်။ ဆက်ရန်.. ပြီး…အရိုင်းမလေးအား ပြန်ကြည့်လိုက်သည်။
အရိုင်းမလေးသည် နိ့ဘတ်လတ်ကြီးဖြင့် ဒူတုတ်၍ ဖနှောင့်နှစ်ဘက်ပေါ် ဖင်ခုထိုင်နေသည်ကို လရောက်အောက်၌ ဘေးတိုက်တွေ့မြင်နေရသည်။ ပြည့်ဖြိုးစုချွန်နေ၍ ရှေ့သို့ ငေါငေါကြီးဖြင့် တုန်ခါနေသော နိ့ကြီးနှစ်လုံးမှာ လရောင်ဖြင့် ထင်ရှား စွာ တွေ့မြင်နေရသည်။ သူမ၏ သေးကျင်သော ခါးအောက်မှ တင် ပါးကြီးများ စွင့်ကား၍ ဖနှောင့် ၏ ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်စီကို အိကျနေသည်။ အရိုင်းမလေး..မော့သောက်နေသော ဝါး ကျည် တောက်ကိုချ၍ ဒူးထောက်လျက် အနေထားဖြင့် မသံဇီ ရှိရာသို့ တရွေ့ရွေ့ တိုးကပ်လာသည်။ ပြုံးချိုရွင်ပြနေသော သူမ၏မျက်နာ…စိမ်ရည်ကြောင့်လား မသိ နီရဲနေသည်ဟု မသံဇီ ထင်မိသည် ဝါးကျည်တောက်ကို မိမိအား လှမ်းပေးနေသည့် အရိုင်းမလေးအား တစ်ချက် စူးစူးဝါးဝါး စိုက် ကြည့်ရင်း စိမ်ရည်ကို မော့သောက် လိုက်သည်။ ဝှူး….ပူနွေးရှတ ချိုမြိန်သော စိမ်ရည် လည် ချောင်းတစ်လျောက် လျှောကနဲ ဆင်းသွားသည်နှင့် နားထင်ပါ ရင်းများ ထူပူသွားခါ ပင်ပန်းနေသမျှ အမောပြေခါ ခန္တာကိုယ်တစ်ခုလုံး ထကြွလန်းဆန်းပြီး ကာမ ဆန္ဒတွေ တဟုန်ထိုး တက်ကြွလာ ရလေတော့သည်။ ထောက်ထားသော ဒူးများပေါ် လက်နှစ်ဘက်ထောက်ပြီး မိမိအား ရွင်ပြုံးကြည်လင်စွာ မော့ကြည့် နေသော အရိုင်းမလေးကို မသံဇီ ငုံ့ကြည့်လိုက်ရင်း..ဝါးကျည်တောက်ကို သဲသောင်ပြင်ပေါ် ထောင်ထားလိုက်သည်။ အရိုင်းမလေးကို ငုံ့၍ လက်မောင်းနှစ်ဘက်မှ ဆွဲမလိုက်သည် …အရိုင်း မလေး အလိုက်သင့် ကြွ၍ပါလာသည်။
မျက်နာချင်းဆိုင် မတ်တပ်ရပ်မိပြီ ဆိုမှ မသံဇီ .. သူမအား ခါးမှကိုင်ဆွဲ၍ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ဖိကပ်နမ်းစုပ်လိုက်၏။ လက်များကလည်း သူမ၏တင်ပါးကြီး များ ကို ဆုပ်ချေပွတ်သပ်နေ၏။ အရိုင်းမလေး ခြေဖျားထောက် ခါးကော့ ရင်လေး မောက်ကြွလာသည်အထိ မသံဇီ၏ အနမ်းများ အောက်မှ တလူးလူး တ လွန့်လွန့်နှင့်ရှိနေရှာတော့သည်။ ” ဟွန်း … ဟွန်း …အင်း …ဟင့် … ဟင့် .. ” သွားလေးများဖြင့် နိ့သီးခေါင်းလေးကို မနာ့တနာ ဖိကိုက်ပေးလိုက်တော့ အရိုင်းမလေး ထွန့်ထွန့် လူးရင်း နှုတ်ဖျားမှ မပီဝိုး ဝါး ငြီးတွားနေရလေတော့သည်။ မသံဇီ ..သူမကို အားပါးတရ နမ်းရှိုက် ပွတ်သပ်ဆုပ်ချေပြီး..သူမကို သောင်ပေါ်၌ လေး ဘက်ထောက်စေလိုက်သည်။ အရိုင်းမလေး လရောင်အောက် သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ ဒူးလေးခပ်ကားကားထောက် ခါးလေးကော့ ဖင်လေး နောက်ပစ်လိုက် သဖြင့် ဖင်တုန်ကြီးများအောက် ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ စောက်ဖုတ်ကလေးမှ ပြူးပြူးပြဲပြဲလေးသာ ထွက်လာခါ ..လိုးပါတော့ … ဆိုမယောင် မသံဇီအား ဖိတ်ခေါ်နေပေ၏။ မသံဇီ .. သူမ၏ခြေနှစ်ချောင်းအကြား အနေတော် နေရာယူ၍ မကုန်းမကွပုံစံဖြင့် သူ၏ သံချောင်း တမျှ ကြီးထွားမာ ထန်နေသော လီးကြီးကို အရင်းမှကိုင်ခါ အရိုင်းမလေး၏ စောက်ခေါင်းဝတွင် တေ့ထောက်လိုက်ပြီး သူမ၏ ခါးကို လက်နှစ် ဘက်ဖြင့်ဆွဲကိုင်၍ အားဖြင့်ဖိဆောင့် ချလိုက်သည်။
”ဗြစ် …ဒုတ် ..အား ..” စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားကြီးများ မသံဇီ၏ လီးကြီးနှင့်အတူ စောက်ခေါင်းဝ အတွင်းသို့လိပ်ဝင် ချိုင့်ခွက်သွား လေသည်။ ယင်းအချိန်တွင် ပြည့်ဖြိုးတင်းမာ စွင့်ကားနေသော သူမ၏ တင်ပါးနှစ် ဘက် တုံကနဲ..တုံကနဲ လှိုင်ထ၍သွားသလို နိ့ကြီးနှစ် ဘက်မှာလည်း ရှေ့နောက်ဘယ်ညာ ရမ်းခါ ၍ နေသည်။ မသံဇီ ..ရမ်းခါနေသော သူမ၏ နိ့ကြီးများကို လှမ်းကိုင်ဆွဲယူရင်း အဆက်မပြတ် လိုးဆောင့်နေပြန်သည်။ ”စွတ် …စွတ် …ဗြစ် …ဖတ် ဖတ် ..ဒုတ် …” ”ဗြစ် ..အင့် …အင်း …အိုး ….ဟား ….. အင့် .. ဟင့် ..” အရိုင်းမလေး နှုတ်ဖျားမှ ငြီးငြူရင်း မသံဇီ၏ လိုးဆောင့်ချက်များ အလိုက် မိမိ၏ဖင်ကြီးကို နောက် သို့ဆုတ်ကော့ ပေးလိုက် သည် ။ မသံဇီး၏ ပြင်းထန်သွက်လက်သော လိုးဆောင့်ချက်များကြောင့် အရိုင်းမလေးမှာ မသံဇီ စွဲအောင်ကောင်းစေပြန်ရာ သုတ်ရေများကို တဖြင်းဖြင်း ပန်းထုတ်လိုက်ရ သည် ။ စောက်ဖုတ်အတွင်းမှ ယိုစိမ့်စီးကျလာသော အရည်များမှာ စောက်စေ့လေး ကို ရီးလေးခို တွယ်ရင်းမှ သောင်ပြင်ပေါ်သို့ တစ်စက်ခြင်း ခုန်ဆင်းကျကုန်ရပြန်လေ၏။ လီးကြီး၏ အရှိန်ကမသေ …သားအိမ်ရင်းထိအောင် တဒုတ်ဒုတ် တဘွတ်ဘွတ် မြည်အောင် အသံ ကြီးများမြည်အောင် ဆက် တိုက်ဆောင့်လိုးနေသည်။
”ဘွတ် ..ဘွတ် …ဖွတ် …ပြွတ် …ဘူ ..” ”အဟိ …ခစ် ခစ် …အင့် …ဟီး …ရှီး” စောက်ခေါင်း ကျယ်လာသည်နှင့်အမျှ လေဝင်မှုပိုလာပြီး လီးကြီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက်တိုင်း အီးပေါက် သကဲ့သို့သော အသံကြီး များ ထွက်လာလေသည်။ မသံဇီ နောက်ဆုံးအားကုန် ဆောင့်လိုက်ပြီး … အရိုင်းမလေး၏ စောက်ခေါင်းဝသို့ သုတ်ရေများ ကို ပန်းထဲ့လိုက်သည်။ ထို့နောက် သုတ်ရေများ ဖြင့် စိုရွဲနေသော လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်ထဲမှ ဖြေးဖြေးခြင်း ဆွဲထုတ် ချွတ် လိုက်သည်။ ”ဘူ …ဘွတ် …ဘွ …ဗွ” ”ဟီး …ဟိ …ခစ် ခစ် …ဟားဟား ..” မတိုင်ပင်လိုက်ရပါပဲနဲ့ နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူရယ်မောမိလိုက်သည်။ လီးကြီး ဆွဲချွတ်လိုက်မှ လေများပြန်အံသည့် အသံ က အီးပေါက်သည့်အသံ့သဖွယ် တဘူဘူ…တဗွဗွ ဖြစ်နေသမို့ … သည့်နှယ် ရီမောလိုက်ကြခြင်း ပင်ဖြစ်သည် ။ ခဏအကြာ…အားပါးတရ ရီမောပြီိး အရိုင်းမလေး သုတ်ကနဲ နေရာမှ ထပြေးသွားသည်။ မသံဇီ … အမှတ်တမဲ့မို့ လှမ်းမ ဆွဲဖြစ် … ”ဗွမ်း …..” အရိုင်းမလေး…မသံဇီ အနားမှ ပြေးထွက်၍ ချောင်းရေထဲသို့ ခုန်ချလိုက်သည်။ ရေစ်ရေပေါက် များ ဖွာကနဲလွင့်စင် ကုန် သည်….မသံဇီ သူမကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်. ရွှန်းပျက်တဲ့ လရောင် အောက်မှ ရေကူးနေသည်မှ ဖျံမလေးသဖွယ်…သွက် လက်လွန်း လှပလွန်းလှသည်မို့…သူ ငေး မော ကြည့်ရှု နေမိရပြန်သည် ….။ ပြီး။
မသံဇီ ဆိုတဲ့ လူကောငျ ထှားထှား သကောငျ့သားကလညျး ပါဒနိငျငံဧ။ျ အရှငျ မဖွဈမညျ့ မငျးသမီး စောနနျးအား ကယျတငျ ဖို့ စလှေတျလိုကျသညျ့လူပေါငျးသုံးဆယျ…ဝါ…ကွောငျရိုငျးသုံးဆယျထဲမှ တဈကောငျပငျဖွဈ သညျ။သူဧ။ျလမျးကွောငျးအတိုငျး သတျမှတျနယျမွကေို သတျမှတျခြိနျအတိုငျး အရောကျခြီတကျ ထိုး ဖေါကျဝငျလာသူ ဖွဈသညျ။ ဒီနရော အရောကျမှာ နီဂရီ အရိုငျးမလေး ရခြေိုးနသေညျကို အမှတျမထငျတှရှေိ့ရာမှ … သညျအ နီးတဝိုကျ နီဂရီလူရိုငျး အုပျစုတဈစု ရှိနပေမေညျ…သူမမှတဆငျ့ ခွရောခံလိုကျနိငျရနျအတှကျလဲ ပါသလို သဘာဝအတိုငျး ရခြေိုးနသေညျကို တပျမကျ စိတျနဲ့ ငေးမောကွညျ့ရှုနခွေငျးလညျး တ ပိုငျးပငျ …။ ယခု…နီဂရီသူ..အန်တရယျတှနေ့ပွေီိ…မသံဇီ ဘာလုပျရမညျနညျး..ဝခှေဲမရ…နောကျဆုတျ ရှောငျ ကှငျးသှားရမညျလား… ဒုက်ခတှနေ့သေူကို ကူညီရမညျလား..မဆုံးဖွတျနိငျပဲ နီဂရီသူလေးကို ငေး ကွညျ့နမေိလိုကျသညျ။ နီဂရီ လူရိုငျးမကလေး ကမျးစပျနှငျ့ နီးကပျလာသလို… မိ ခြောငျးကလညျး လြှငျမွနျစှာ သူမနောကျမှ ကူးခပျလိုကျပါလာလသေညျ.. ဝါးတဈထောကျ အကှာ အဝေးပငျ မရှိတော့ .. တိကြ ခိုငျမာစှာ မဆုံးဖွတျနိငျခငျမှာပဲ…မသံဇီလကျ၌ တဈဘကျတဈခကျြဆီ ကိုငျဆှဲထားသော… လှံရှညျနှငျ့ ဓါးအိတျကို လှတျခြ လိုကျသညျ။ ခါး၌ထိုးထားသော မိမိဧ။ျ အပိုငျနိငျဆုံး ကိုငျတှယျအ သုံး ပွုနကြေ..ဓါးမွှောငျရှညျကို ဆှဲထုတျလိုကျပွီး ကမျးထိပျမှနေ ၍ လူရိုငျးမလေးနှငျ့ မိခြောငျးကွား သို့ ဦးစိုကျဂြှမျးထိုး ခလြိုကျသညျ ။
ဗှမျးကနဲ ရလှေိုငျးမြား ထသှားသညျ..အရိုငျးမလေး ပို၍ထိတျလနျ့ခါ အားကုနျကူးခပျလိုကျ သလို.. ရလေုံးမြားက မကျြကှယျပွု သဖွငျ့ မိခြောငျးသညျ တဒဂျ အရှိနျတနျ့သှားသညျ။ မသံဇီ ရအေောကျ မှ အရှိနျဖွငျ့ငုတျလြှိုး၍..မိခြောငျးရှိရာသို့ ကူးခပျသှားသညျ။ မိခြောငျး ဝမျးဗိုကျအောကျ အရောကျ ပကျလကျလှနျလိုကျသညျ။ မိခြောငျးရဲ့ လညျပငျးကိုဖကျတှယျလိုကျပွီး..ဓါးမွောငျဖွငျ့ပငျ မိခြောငျး ဧ။ျ ဝမျးဗိုကျကိုပငျ ထိုးလိုကျသညျ။ စှပျ..ကနဲ ဓါးမွောငျ အဆုံးထိနှဈဝငျ သှားရသလို..လူမှာလညျး ရမျးခါသှားသဖွငျ့ မိခြောငျးဧ။ျ လညျပငျးကို ပို၍တငျးကွပျစှား ဖကျတှယျထားလိုကျသညျ။ ဝဲဂရကျထ လှုပျရှားနသေော ရပွေငျထကျ နီရဲသော သှေးမြား ဖြာ၍တကျလာသညျကို ကုနျးပျေါမှ စိုးရိမျစိတျဖွငျ့ စောငျ့ ကွညျ့နသေညျ့ ..လူရိုငျးမလေး မွငျတှလေို့ကျရတော့ ပါးစပျကလေး ‘ဝ’ လုံး သဏ်ဌာနျလုံးဝနျး ဟသှားသညျ။ မိမိဧ။ျ အသကျအန်တရယျကို ဝငျရောကျယျတငျသူ မညျသူဖွဈသနညျး ..သူအန်တရယျ ကငျးမှ ကငျးပါလစေ …။ ဟော…သှေးတှေ..လှိုငျးထလှုပျခါနတေဲ့ ရတှေနေဲ့အတူ ရမေကျြနာပွငျပျေါမှာ..အနီရောငျ ဆိုး လိုကျပွနျပွီ ။ လူသားသှေးလား.. မိခြောငျးသှေးလား..ဝခှေဲမရ…စိုးရိမျကွောငျ့ကွဟနျဖွငျ့ ငေးမော ရပျတနျ့နပေုံမှာ…ဆညျးဆာရဲ့ နရေောငျအောကျမှာ..လှခငျြတိုငျး လှနတေဲ့ အရိုငျးမလေး…အရပျအမောငျးက မနိမျ့မမွငျ့ ခန်ဒာကိုယျ မဆူလှနျး မကွုံ့လှနျး..မကျြနာသှယျသှယျ နှာတံပျေါပျေါ.. ကွညျလငျ ဝိုငျးစကျနသေညျ့ မကျြဝနျး..ပိပွားသသေပျသညျ့ နုတျခနျးနှဈလှာလေးက ပှငျ့ဖူးစ နှငျးဆီ ငုံဖူးပမာ နီရဲတောကျပနေ ဧ။ျ ။ လုံးဝနျးစုခြှနျနတေဲ့ သူမပိုငျ..ရငျနှဈမှာ ဟာ ငေါငေါကွီးရှသေို့ စူထှကျ၍ တုနျ ခါနသေညျ ..ဇီးစပေ့မာ နီရဲနတေဲ့ နိ့သီးခေါငျးလေး နှဈဖကျမှာ…ရစေကျမြား ရီးလေးခိုနေ ဆဲ ….။ ပွလြေောနှိမျ့ဝငျသှားတဲ့..ဝမျးပွငျသားခပျြခပျြကလေး အောကျမှာတော့ ပွညျ့တငျးဖွောငျ့တနျး နတေဲ့ ပေါငျတနျကွီးမြားက အရှကျ လုံရုံ ..ပတျခညျြထားသော သမငျရစေ အောကျကနေ ကုနျးရုနျးထ တော့မယောငျ…ဖွိုးဖွိုးပွညျ့ပွညျ့ ရှိလှနျးလှသညျ။
သေးကငျြပွီး ခနျ့ထညျသညျ့ ခါးအောကျတငျ ပါးကွီးမြားကလညျး စှငျ့ကားပွညျ့တငျးလှနျးလှဧ။ျ…။ တောငျပျေါ တောငျအောကျ အတကျအဆငျး မြားလှနျးရော့ထငျ့ ….ခွသေလုံးသားမြား ကလညျး တုတျခိုငျပွညျ့တငျးနဧေ။ျ …. လှုပျခပျနသေညျ့ ရပွေငျဟာ .. တခဏအတှငျးမှာ ငွိမျသကျသှားသညျ … နောကျ ရပေျေါသို့ မိခြောငျးသဏ်ဌာနျ တဈခုပျေါလာ သညျ …. ”ဟော … မိခြောငျး ….” အရိုငျးမလေး နုတျဖြာမှ..ဝမျးသာအားရ ကွှေးကွျောလိုကျသညျ ။ မိခြောငျးမှာ ရပေျေါသို့ ပကျ လကျလှနျပွီး ပျေါလာကာ ဝမျး ဗိုကျဟောငျးလောငျးဖွဈနသေညျကို မွငျလိုကျရပွနျသညျ။ ရစေီး အားနဲ့ မိခြောငျး တဈပတျလညျသှားပွီး မှောကျလကျြ အနအေထား ဖွဈသှားကာ အောကျနား ကမျးစပျဆီ မြှောပါသှားသလို..သညျဘကျ ကမျးစပျဆီသို့ လူတဈယောကျ ဘှားကနဲ ပျေါလာဧ။ျ မသံဇီ အသကျကို အားပါးတရ ရှုလိုကျပွီး ကမျးစပျဆီ လှမျးတကျလာသညျ ။ ဆံပငျစုတျဖှားဖွငျ့ ဆိုတော့ မညျသူမှနျး မသိသေး… မိမိမြိုးနှယျစုထဲကလူ မဟုတျမှနျးတော့ အရိုငျးမလေး အတတျ သိလိုကျသညျ။ ကမျးစပျ သဲသောငျပွငျပျေါသို့ ဒရိနျးဒရိုငျဖွငျ့ တဈလှမျးခွငျး လှမျးတကျလာသညျ့သူ ကမျးစပျ သောငျပွငျပျေါ အရောကျမှာ .. ဒူးထောကျပွီး ခဏ မှောကျလကျြ လဲကသြှားသညျ ။ ”အိုး..ကွညျ့…သူ့နောကျကြောမှာ မိခြောငျး ကုတျမိတဲ့ လကျသညျးရာ အစငျးကွောငျး ..သုံးလေး ခု သှေးတှေ ခငျြးခငျြးနီရဲ နေ ပါရော့လား … ” အရိုငျးမလေး တီးတိုးရရှေတျရငျး…ကမူထိပျမှ ပွေးဆငျးလာသညျ။ တဈကိုယျလုံး ရမျးခါကုနျ သညျ…ရငျတှေ..တငျတှေ..ခွေ လှမျးလိုကျတိုငျး လှမျးလိုကျတိုငျး တုနျခါလှုပျရမျးနကွေသညျ။ သူမ မသံဇီ အနားရောကျ..ဒူးနှဈဖကျထောကျပွီး…သှေးတှေ စို့ ထှကျနတေဲ့ ဒါဏျရာကို လကျခြောငျး သှယျသှယျလေးတဈဖကျနဲ့ အသာ အယာ ..ပှတျသပျပေးလိုကျသညျ … ။
မသံဇီ တဈခကျြ တှနျ့ကနဲ ဖွဈသှားသလို … နုတျမှလညျး တကြှတျကြှတျနဲ့ စုပျထိုးလိုကျရပွန သညျ ။ အရိုငျးမကလေး သုတျ ကနဲ ဒူးထောကျထိုငျနရောမှ ..ထပွေးသှားသညျ …ခြောငျးနှငျ့မ လှမျးမကမျး တောထဲသို့…။ တခဏအတှငျး အရိုငျးမကလေး တာထဲမှာ ပွနျပွေးထှကျလာ သညျ ..လကျထဲမှာ ဝါးကညျြတောကျ နှဈလုံးကိုငျဆှဲလာသညျ … မှောကျလကျြ ရှိနသေညျ့ မသံဇီ အနားမှာ ဒူနှဈဖကျထောကျလိုကျပွီး…ဝါးကညျြတောကျ တဈခုထဲမှာ ပဈြခြှဲစေးထနျးသညျ့ အနီ ရောငျ အရညျမြားဖွငျ့ လကျသညျး ရာမြားပျေါတှငျ လောငျးခလြိုကျသညျ။ ”အား …. ရှီး … ကြှတျ … ကြှတျ ..” မသံဇီ နုတျဖြားမှ အသံထှကျ ညညျးငွူလိုကျသလို ကြောကိုလညျး တှနျ့လိမျပွဈလိုကျသညျ ။ အ ရိုငျးမလေး နုတျခမျးထောငျ့ စှနျးမှာ…အပွုံးရိပျကလေး တဈခကျြ ထငျဟပျလာပွီး…မသံဇီဧ။ျ ကြော လကျပွငျနှဈခုကွားကို လကျတဈဖကျဖွငျ့ ဖိထားလို ကျပွနျသညျ။ ပွီး…ဝါးကညျြထောကျ တဈခုထဲ မှာ သဈမွဈနှငျ့ သဈရှကျတခြို့ကို ထုတျယူခါ…သူမဧ။ျ ပါးစပျကလေးထဲသို့ ပဈထညျ့ဝါးလိုကျဧ။ျ … အတနျကွာမြှဝါးပွီး အဖတျမြားကို မိခြောငျးကုတျခွဈလိုကျသော မသံဇီဧ။ျ အနာမြားပျေါသို့ တယု တယ လိမျးကြံပေးလိုကျသညျ။ နှေးကနဲ နရောမှ အေးသှားပွီး အနာမှာ စပျဖငျြးနာကငျြသော ဝဒေနာမြားမှာ နလောနှငျးပြောကျ ဆိုသလို သကျသာ သှားလတေော့ သညျ။
အရိုငျးမလေး…မသံဇီဧ။ျ အနာတဝိုကျကို ပှတျသပျပေး လိုကျပွနျသညျ ။ အတနျကွာ မသံဇီ အနာသကျသာ သှားသလို.. အမောမြား ပွပြေောကျသှားပွီမို့ လေးဖကျ ကုနျးရုနျးထလိုကျပွီး …အနားရှိ ကြောကျတုံးလေး တဈတုံးပျေါ ဖငျခုထိုငျလိုကျသညျ။ အရိုငျးမလေး ပွုံးရှငျစှာဖွငျ့ မသံဇီ အနားတိုးကပျလာခါ…ဒူးထောကျထိုငျလိုကျသညျ…လကျထဲမှ ဝါးကညျြထောကျကို …ထိုးပေး လိုကျပွီး မော့သောကျဟနျ ပွလိုကျသညျ …. မသံဇီ ယောငျယောငျအမှားမှားဖွငျ့ ဝါးကညျြတောကျကိုလှမျး ယူလိုကျပွီး …အရိုငျးမလေးကို စူး စိုကျကွညျ့လိုကျသညျ…နိ့ဘတျ လတျကွီးဖွငျ့ ဆညျးဆာ နရေောငျအောကျမှာ တမြိုးလေးကွညျ့ လို့ လှလှနျးစှ …ဘယျအခြိနျက ဆှဲလိုကျမှနျးမသိ…လညျပငျး မှာ ဝကျစှယျမြားဖွငျ့ သီကုံးထား သော ပုတီးကုံးတဈခု ဆှဲထားသညျမှာ..ကြော့ရှငျးသညျ့ လညျတိုငျအား အလှတိုးစနေပွေနျ သညျ။ အသကျရှုလိုကျတိုငျး သူမရဲ့ ရငျနှဈမှာ လှိုငျထ၍ တုနျခါနပွေနျသညျ ..ဒူးနှဈဖကျပျေါ လကျက လေး ထောကျ၍ မော့ကွညျ့နေ သညျ။ မကျြလုံးမြား အရညျမြားဖွငျ့ တောကျပနသေလို ..မဟတ ဟလေး ပွုံးခြိုမွမွ နုတျခမျးဝ ကလေးမြားကလညျး နီရဲစိုစှတျနေ သညျကို မသံဇီ တဒဂျ ငေးမော ကွညျ့ရငျး ဝါးကညျြတောကျကို မော့သောကျလိုကျသညျ။ ပူနှေးခြိုမွိနျသော အရသာနှငျ့ အတူ လညျခြောငျးတလြောကျ ..ပူဆငျးသှားသလို အမောတကော မော့သောကျလိုကျသညျမို့ … အရညျမြား သီးကုနျဧ။ျ …. ”အား …. အဟှတျ … ဟှတျ” ”ခဈ….ခဈ….. ခဈ … ဟီ ဟိ” အရညျမြား သီးပွီးခြောငျးတဟှတျဟှတျ ဖွဈနသေော မသံဇီရဲ့ အဖွဈကို အရိုငျးမလေး သဘောကြ ရော့ ထငျ့..တခဈခဈတဟိဟိ ရယျမောနသေညျမှ ပကတိ အပွဈကငျးစငျလှနျးလှဧ။ျ …. မသံဇီ…ဝါးကညျြတောကျထဲမှ အရညျမြားသညျ စိမျရညျဖွဈကွောငျး သိသှားသဖွငျ့ .. ဖွညျးဖွညျး ခွငျး ..မြှငျး၍ သောကျရငျးမှ အရိုငျးမလေးဧ။ျ လှုပျရှားဟနျကို စူးစိုကျကွညျ့လိုကျပွနျသညျ ..။
အရိုငျးမလေး သူ့ကို မော့ကွညျ့ရငျးမှ သူမဆှဲထားသော ဝကျစှယျပုတီးကုံးလေးကို ဖွုတျလိုကျသညျ .. ပွီးတော့ …မသံဇီအား လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ကမျးပေးလိုကျသညျ ။ ခဏမြှ မသံဇီ အံ့အားသငျ့သလို တှဝေနေရောမှ..သဘောပေါကျလိုကျသညျနှငျ့ ..ဝါးကညျြ တောကျကို သောငျပွငျပျေါမှာ မ လဲအောငျ ထောငျထားလိုကျခါ..ကြောကျတုံးပျေါမှ ဆငျးပွီး အရိုငျးမလေးနှငျ့ မကျြနာခွငျးဆိုငျ ဒူးတိုကျအနထေားဖွငျ့ ထိုငျ လိုကျပွီး ခေါငျးကိုငုံ့ပေးလိုကျသညျ … အရိုငျးမလး အူမွူးသှားသညျ…ဝမျးသာအားရဖွငျ့..မသံဇီအား ပုတီးကုံးကို ခေါငျးမှ စှပျပေးလိုကျ သညျ ။ တဒဂျ တဈယောကျ မကျြနာ တဈယောကျ ငေးစိုကျကွညျ့နရေငျးမှ လကျမြားကို ဆုပျကိုငျ ဖွဈညဈလိုကျကွသညျ။ မသံဇီ သောငျပွငျပျေါ ဖငျခထြိုငျ လိုကျသညျ…အရိုငျးမလေး တအိအိနှငျ့ သူဧ။ျ ရငျခှငျကယျြကွီးထဲသို့ လဲပွိုကလြာသညျ။ အလိုကျသငျ့ ပှဖေ့ကျလိုကျပွီး…အနမျးမိုးမြား…ဆိုငျးမဆငျ့ဗုံမဆငျ့ ..အရိုငျးမလေးဧ။ျ ပါးမြားပျေါ သို့ အဆကျမပွတျ ရှာခြ လိုကျလတေော့ဧ။ျ ။ အသကျကယျရငျ…အသကျပိုငျတယျ..ဆိုတဲ့..ဓလထေုံ့းတမျးလေးတဈခု မညျသူက စတငျလိုကျ သညျမသိ…ယဉျကြေးနပွေီဖွဈ တဲ့ မြိုးနှယျစုတှကွေားမှာ အမွဈတှယျနဆေဲမို့..အရိုငျးမလေး မသံ ဇီကို မိမိဧ။ျ အသကျသခငျ..ဝါ..သကျဦးဆံပိုငျ အရှငျသခငျ အဖွဈ သတျမှတျပွီး ကွငျနာမှုတှေ ပေး ဆပျမှုတှေ တနငျ့တပိုးဖွငျ့ မသံဇီအား ပွုစုနပွေနျသညျ။ ပူနှေးရှတတဲ့ အနမျးတှနေဲ့အတူ မွှလေိုရဈပတျ ပှတျသပျနမှေုကလညျး အရိုငျးမလေး သှေးတိုး ဆူဝေ စပွေနျသညျ။
မသံဇီ အစောက သောကျလိုကျရသော စိမျရညျဧ။ျ တနျခိုးကွောငျ့ နှလုံး သှေးခုနျမွနျလာသလို ခေါငျးတဈခုလုံး ရီဝမေူးနောကျနမှေုနဲ့ အတူ….။ နူးညံ့အိထှေးသော အရိုငျး မလေးဧ။ျ ခန်ဓာကိုယျမှ အထိတှတှေ့ကေ ရာဂသှေးကို မွှငျ့တငျပေးနသေညျမို့… သူမဧ။ျ နှငျဆီငုံဖူးပမာ နီတြာတြာ နှုတျခမျးလှာလေးကို ဖိကပျနမျးစုပျလိုကျသလို လကျတဈ ဖကျကလညျး သူမဧ။ျ ပွညျ့တငျး စုခြှနျ တုနျခါနတေဲ့ နိ့လေးမြားကို ပှတျသပျဆုပျခြေ ပေးလိုကျ သညျ။ အရိုငျးမလေး ကြောကော့၍သှားဧ။ျ။ သူမဧ။ျ လကျလေးနှဈဖကျကလညျး မသံဇီဧ။ျ ခါးကို တငျးကပျြစှာ ပွနျလှနျဖကျတှယျ ပွဈလိုကျဧ။ျ။ မသံဇီ နီဂရိ အရိုငျးမလေးကို သဲသောငျပွငျပျေါသို့ လှဲခလြိုကျပွီး …သူမဧ။ျဘေးမှ လှဲလြောငျးခြ လိုကျရငျး..နို့လေးမြားကို တဈ လှဲ့စီ ငုံခဲစို့လိုကျပွနျသညျ။ ဇီးကငျးစေ့ ပမာဏလောကျရှိတဲ့ နီ တြာရဲ နို့သီးခေါငျးလေးကို သှားလေးမြားဖွငျ့ မနာ့တနာ ဖိကိုကျ လိုကျသလို ကနျြနို့တဈဖကျ ကိုလညျး လကျခြောငျးကွားမှာ ဖိခပြှေတျသပျလိုကျတော့ အရိုငျးမလေး လူးလှနျ့ လှုပျရှားရငျး … ”ဟငျး…ဟငျ့… . ဟ …. ဟီး …. ဟငျ့ …. အငျး ….” ရာဂစိတျတှေ တဈကိုယျလုံး တရှိနျးရှိနျး တဖိနျးဖိနျးတကျလာခါ နှုတျဖြားမှ တဟငျးဟငျး ငွီးငွူ နရှောဧ။ျ ။ မသံဇီ သူမဧ။ျ သေး သှယျသော ခါးမှ သရနှေယျကွိုးကို ဖွုတျခလြိုကျသဖွငျ့ အရကျလုံရုံ ပတျထားသော ခါးမှ သားရခေပျြကလေး သောငျပွငျပျေါ ပွုတျကသြှားရပွနျသညျ။ ပွညျ့ဖွိုးလုံးဝနျး ဖွောငျ့တနျးတဲ့ ပေါငျတနျကွီးမြားနှဈဖကျကွားမှ မဲနကျတောကျပွောငျနသေော စောကျမှေးမြားဖွငျ့ ခွံရံလကျြ ဖါးခုံ ညှငျးပမာ စောကျဖုတျကလေးကို လကျဖွငျ့ ဖှဖှရှရှလေး ပှတျ သပျပေးသလို ကောကျကှေးမဲနကျတဲ့ စောကျမှေးလေးမြားကို တငျး ကနဲနအေောငျ ဆုပျဆှဲလိုကျ သညျ။
”အိုး ….အဟငျ့ …. ဟငျး …ဟငျး..” အရိုငျးမလေး ဖငျလေးယမျးခါ သှားရပွနျသညျ။ ရေးရေးမြှထငျနသေော အကှဲကွောငျးတဈ လြောကျ လကျခြောငျး (လကျခလယျ ) ဖွငျ့ ထကျအောကျ ပှတျသပျပေးပွီး သူမဧ။ျ စောကျခေါငျး လေးထဲသို့ ထိုးထဲ့မှနှေောကျပဈလိုကျသညျ။ ”ပွလှတျ …စှိ…စှိ…အီး….ဟငျး ….ဟငျး..ဟငျး” ဖငျလေး ကော့တကျလာသညျ..သှယျလတြဲ့ လကျခြောငျးလေးမြားကလညျး မသံဇီဧ။ျ ခေါငျးကို ဆံ ပငျမြားမှ ဆုပျကိုငျခါယမျး ပဈ လိုကျရသညျအထိ …ယားသလိုလိုနဲ့ အခံရခကျလှနျးလှသညျ။ သူမ ဧ။ျ တဈကိုယျလုံး ပူနှေးလာသလို အသကျရူသံမြား မွနျ ဆနျလာဧ။ျ ။မကျြဝနျးနကျလေး အစုံက လညျး အရောငျမြား ရှနျးပကျြ တောကျပလာပွနျသညျ။ ပေါငျနှဈဖကျကို ဘေးသို့ အစှမျးကုနျ ဖွဲကားပွဈလိုကျသညျ ။ ရငျနှဈမှာကွားမှ မသံဇီဧ။ျ ခေါငျးကို ဆှဲကိုငျပှတျသပျနမေိပွနျဧ။ျ ။ မသံဇီ ဘေးတဈစောငျးလှဲနရောမှ ထထိုငျလိုကျပွီး ခါးမှ သငျတိုငျးကို ခြှတျလိုကျသျော အကွောမြား အပွိုငျးအရိုငျးနဲ့ မာထနျနေ သောလီးကွီးမှာ ငေါကျကနဲ ငေါကျကနဲ ခေါငျးထောငျထလာသညျကို အရိုငျးမလေး မွငျလိုကျရတော့ ဝိုငျးသှားပွနျပွီ … ဝ လုံး လေးလို သူမ နှုတျခမျးနှဈလှာ ….။ ”အို …” တဈခှနျးထဲပါဘဲ….ရရှေတျခါ မကျြလုံးကို စုံမှိတျပဈလိုကျသလို ခေါငျးကိုလညျး တဈဘကျသို့ လှဲ့ လိုကျပဧေ။ျ။ မသံဇီ အလိုကျ သငျ့ဖွဲကားနတေဲ့ သူမဧ။ျ ပေါငျနှဈလုံးကွားမှာ ဒူးထောကျထိုငျလိုကျ သညျ။ သူမဧ။ျ ပွညျ့တငျးဖွောငျ့စငျးသညျ့ ပေါငျမြားကို မိမိဧ။ျ ပေါငျနှဈဘကျပျေါသို့ တဈဘကျ တဈခကျြ ဆှဲတငျလိုကျသညျ။
ထနျနတေဲ့ လီးကွီးကို အရငျးမှ ကိုငျလိုကျသညျ ..လကျတဈ ဘကျက သူမဧ။ျဆီးခုံပျေါ အသာ အယာဖိထောကျခါ လီးထိပျ ကှမျးသီးခေါငျးကွီးဖွငျ့ သူမဧ။ျ စောကျခေါငျးဝတှငျတေ့၍ ထကျ အောကျ ဘယျညာ မှနှေောကျပေးလိုကျသလို…လီးဖွငျ့လညျး သူ မ ဧ။ျ အဖုတျကလေးကို ရိုကျခတျပေးလိုကျသညျ။ ”ဗုတျ …ဗုတျ…အငျ့ ..ဟငျး ..ဟငျးဟငျး” အရိုငျးမလေး အဖြားတှအေရမျး အရမျးတကျသှားရလပွေနျဧ။ျ။ ဝငျးဝါစိုပွသေော မကျြနာလေးမှာ ကာမသှေးတို့ ဆူကွှရဲရဲနီလပွေီ။ မသံဇီ …သူဧ။ျလီးထိပျ ကှမျးသီးခေါငျးကွီးကို အရိုငျးမလေးဧ။ျ စောကျခေါငျးထဲ နဈဝငျအောငျ ဖိ သှငျးလိုကျဧ။ျ။ ”ပွလှတျ..ကနဲ မွညျသံနဲ့အတူ လီးထိပျကှမျးသီးခေါငျးမှာ အဖုတျကလေးထဲသို့ ကြှံ ကနြှဈဝငျသှားသလို အရိုငျးမလေးခမြာ အသဲတှလှေိုကျကနဲ ဖွဈကာ လဝေငျဟပျသလို မဝခှေဲ နိငျတဲ့ခံစားမှု တဈရပျနဲ့အတူ ခါးလေးတဈခကျြ တှနျ့သှားသညျ။ မသံဇီ..သူမဧ။ျ ခါးလေးကိုလကျတဈဘကျနဲ့ပှဆှေဲ့ယူလိုကျပွီး ကနျြလကျတဈဘကျကလဲ သူမဧ။ျ ကြောအောကျမှ လကျလြှိုသှငျးခါ ပုခုံးစှနျးလေးကို ကိုငျဆှဲလိုကျသညျ။ အားလုံး ခြိနျကိုကျအနအေထားရောကျပွီဆိုမှ …ခါးအားကို နှဲ့ယူလိုကျခါ ဖိသိပျလိုကျပွနျ ဧ။ျ ။ ”ဗွဈ..ဗွဈ…ဗွဈ … အ …အ…အား..” တုတျခိုငျကွီးထှားလှသော မသံဇီဧ။ျ လီးကွီးမှာ အရိုငျးမလေးဧ။ျ အဖုတျကလေးထဲသို့ တဈစတဈ စ ထိုးခှဲဝငျရောကျနသေညျ မှာ တဗွဈဗွဈအသံမြား မွညျနသေလို အရိုငျးမလေးမှာလညျး မိမိအ ဖုတျ အတှငျးကို တုတျတဈခြောငျးဖွငျ့ သပျလြှိုရိုကျသလို ပွညျ့သိပျကပျြတညျးစှာ တရှရှေ့ေ့ တိုး ဝငျလာတဲ့ လီးကွီးဧ။ျ ဒါဏျကွောငျ့ မခြိမဆနျ့အောငျ ခံစားလာရသဖွငျ့ မသံဇီဧ။ျ ရငျ ဘတျကွီးကို လကျကလေးအစုံဖွငျ့ ဆီးတှနျးရငျးရုနျးဖယျလိုကျဧ။ျ။ မသံဇီ..ဖိသှငျးနမှေုကို ခဏမြှ ရပျတနျ့၍ သူမဧ။ျ တုံခတျလှုပျရှားနတေဲ့ နှုတျခမျးလေးကို ဖိကပျ နမျးစုပျလိုကျပွနျသညျ။
သူမဧ။ျ တငျပါးကွီးမြားမှာလညျး သဲသောငျပွငျထဲ၌ အိကနြှဈဝငျမတတျ ပိ ပွားနသေလို ခွထေောကျနှဈခြောငျးမှာလညျး ရမျးခါနပွေနျဧ။ျ။ စုခြှနျမို့မောကျနတေဲ့ သူမရဲ့ ရှရေငျ ဖွိုးဖွိုးတှကေို သာတဈခါ ..နာတဈလှဲ့ဆုပျကိုငျဖဈြညဈ နယျဖတျပွဈလိုကျပွနျဧ။ျ ။ ခပျြကပျ နေ သညျ့ ဝမျးပဉျြးသားလေးကို ဖှဖှရှရှလေး ပှတျသပျပေးနရောမှ တဖွေးဖွေးနဲ့ပွညျ့ဖွိုးဖွောငျ့စငျးနေ သော ပေါငျတနျကို ထကျ အောကျ စုံဆနျပှတျသပျပေးသလို မိမိဧ။ျ လီးကွီး သုံးပုံတဈပုံခနျ့ နှဈဝငျ နသေော အရိုငျးမလေးဧ။ျ အဖုတျနှုတျခမျးတဈဝိုကျကို ပါ လကျခြောငျးလေးမြားဖွငျ့ ပှတျသပျခါ မဲ နကျ ကှေးကောကျနသေော စောကျမှေးမြားကို ဆုပျဆှဲလိုကျ …ပှတျလိုကျလုပျပေး လိုကျ တော့ သညျ။ အရိုငျးမလေး တှနျ့ထိုးရုနျးကနျနမှေုမြား ငွိမျသကျသှားသလို ခွနှေဈခြောငျးကို အစှမျးကုနျ ဖွဲကား မွှောကျတငျလိုကျဧ။ျ … နှုတျဖြားမှလညျး … ”အငျး …ဟငျးဟငျး .. အိုး…ရှီး..” ငွီးငွူမှုနဲ့အတူ သူမဧ။ျ စောကျခေါငျးအတှငျးသား နံရံမြားကလညျး ရှုံ့ပှရှုံ့ပှဖွဈလာခါ အရညျမြား ကို တစိမျ့စိမျ့ ယိုထှကျကလြာ ကုနျဧ။ျ ။ ဆကျရနျ မသံဇီ…သုံးပုံ တဈပုံခနျ့ ဝငျနသေော မိမိဧ။ျ လီးကွီးကို …ဒဈဖြားကနျြရုံလေး အသာဆှဲခြှတျလိုကျ သညျ။ နောကျ…. အားဖွငျ့ ဇတျကနဲ ဖိသိပျလိုကျပွနျသညျ။
”ဗွဈ . . ဗွဈ . .ဒုတျ . . အား … အီး .. အီး .. ရှီး …ကြှတျ ..ကြှတျ .. အငျး .. ဟငျးဟငျး” အရညျမြားဖွငျ့ စိုစှတျရှဲအိနသေဖွငျ့ ဒီတဈခြီ ဖိအသိပျမှာ လီးကွီးတဈဆုံးထိ နဈဝငျသှားရသလို ဒဈဖြားက အရိုငျးမလေးဧ။ျ အသားအိမျကို သှားထိမိလိုကျရာ ….အရိုငျးမလေး ဖတျြဖတျြလူး ငွီးငွူ တှနျ့လိမျရုနျးကနျ မိရပွနျဧ။ျ။ ပူကနဲ ဝငျလာသော လီးအရသာကို ပထမဆုံး ခံစားလိုကျရပွနျသဖွငျ့ အရိုငျးမလေး အသဲရော အူပါ ပွုတျထှကျကုနျပလား ဟု ထငျမှတျရလောကျအောငျ ကာမအရသာကို တှထေိ့ခံစားလာလေ သညျ။ ပှတျသပျ ခြော့မွူနရေငျးမှ မသံဇီ…လီးကွီး ကို ဒဈဖြားကနျြရုံလေး အသာနှဲ့ခြှတျလိုကျဧ။ျ … ပွီးနောကျ အားကုနျဖိဆောငျ့လိုးခြ လိုကျလသေညျ ။ ”စှတျ …ဗဈြ .. ဗဈြ ..စှပျ ..စှတျ ..ဒုတျ” ”အငျး .. ဟငျး ..ဟငျး …အငျး … ရှီး .. အား … ကြှတျ ..ကြှတျ …အိုး ..” အရညျကွညျမြားဖွငျ့ စှတျစိုနပွေီ ဖွဈသဖွငျ့ အတားဆီးမဲ့ စူးနဈစှာ အဆုံးထိ ဝငျရောကျလာသော လီးကွီးမှာ လုံးပတျအတနျ ငယျ ကွီးမားနရော အရိုငျးမလေးဧ။ျ စောကျဖုတျတဈခုလုံး ပွညျ့ကွပျ တငျးကငျြ သှားမိသညျမို့ တဈခါဘူးမြှ အလိုးမခံဘူးသော အရိုငျးမလေးမှာ အသဲခိုကျမြှ အျောဟဈ မိလိုကျပွနျသညျ။ မသံဇီ…မလြှော့တော့ အဆကျမပွတျ ဖိဆောငျ့လိုးနေ လိုကျသညျမှာ ဒလစပျ မွနျဆနျသှကျ လကျ လှနျးလှဘိသညျ။ တဈခါ ဘူးမြှ မလိုးဘူးသညျ့ မသံဇီနှငျ့ တဈခါဘူးမြှ အလိုးမခံဘူးသေး သေော အရိုငျးမလေးတို့နှဈယောကျ စပျဖငျြးနာကငျြမှုနဲ့အတူ ထူးခွားကောငျးအီသော အရသာ ကို စတငျခံစား လာရပွီမို့ မနားတမျး လိုးဆောငျ့နသေလို အရိုငျးမလေးမှာလဲ အောကျမှနေ၍ အံ ကလေးကွိတျခါ ဖငျတုနျကွီးမြားကို ကော့မွှောကျပငျ့တငျ ပေးနလေိုကျပွနျဧ။ျ ။
”ဗွဈ..စှိ..စှတျ..ဒုတျ…ပွလှတျ..ပွှတျ …ဒုတျ” ”အာ့…အ …အီး…အိုး….အငျ့..အငျ့..အငျ့…” ဖိသိပျပှတျခြေ လှုပျရမျးနမှေုကွောငျ့ နှဈဦးစလုံးဧ။ျ လိငျအင်ျဂါမြား ပူထူရှိနျးဖိနျးပွီး မထိနျးနိငျ မသိမျး နိငျဘဲ ပထမဆုံး အခြီကို မကွာ မတငျမှာဘဲ သုတျရညျမြားကို ပွိုငျတူပနျးထုတျ မိလိုကျကွရငျးမှ တဈဦးနဲ့တဈဦး တငျးကပျြစှာ ဖကျပဈလိုကျလပွေနျတော့ဧ။ျ။ ဝငျးဝါစိုပွသေော အရိုငျးမလေးဧ၊ျ မကျြနာမှာ ကနြေပျသော အားရသော ပီတိတဈရပျနဲ့အတူ သကျပွငျးမောလေး ရှိုကျထုတျ လိုကျပွနျသညျ။ ပူနှေးသော အရိုငျးမလေးဧ၊ျ အသကျပွနျလသေညျ မသံဇီဧ၊ျ မကျြနာကို ရှိုကျတို့၏ထိနဧေ၊ျ။ မသံဇီ အရိုငျးမလေး ၏ မကျြနာကို စစေ့ကွေ့ညျ့ရငျးမှ သူ မ၏ ခဈြစဖှယျ မကျြနာပွငျပျေါက ဇောခြှေးလေးမြားကို တယုတယ ပှတျသပျသုတျသငျပေး လိုကျ ပွီး နှငျးဆီသှေးရောငျ ဖူးဖူးရှရှ နှုတျခမျးလေးကို မိမိပါးစပျဖွငျ့ ငုံခဲစုပျယူလိုကျသညျ။ အရိုငျးမလေးကလညျး မသံဇီ၏ ဂုတျပိုးကို ဖကျတှယျရငျးမှ တုနျ့ပွနျနမျးရှိုကျ လိုကျ၏။ မသံဇီ၏ လကျမြားကလညျး အငွမျ မနတေော့ပါ…အရိုငျးမလေး၏ တောငျပူစာလေး နှဈလုံးနှယျ စုခြှနျမတျ ထောငျနတေဲ့ နိ့လေးတှကေို ဆုပျခနြေယျဖတျ နသေညျ။ အရိုငျးမလေး…မသံဇီ၏ ခြိုမွိနျရှတပူနှေးသော အနမျးမြားကွောငျ့ တဒဂျ ငုတျလြှိုးနတေဲ့ ကာမ ဆန်ဒမြား မီးတောငျပေါကျသလို တဖှားဖှား လှငျ့ပွနျ့လာသညျ။
ထို့အတူပငျ မသံဇီလညျး အရိုငျးမ လေး၏ တုံနျ့ပွနျယုယမှုကွောငျ့ သူမ၏ အဖုတျလေးထဲမှာ မခြှတျဘဲစိမျထားတဲ့ လီးမှာလညျး တဈ စတဈစ ပွော့ခှနေရောမှ မာထနျလာသညျမှာ အရိုငျးမလေး၏ အဖုတျတှငျး တဈလြှောကျ ပွညျ့ သိပျ၍ပငျ နတေော့သညျ။ မသံဇီ..မှောကျလကျြရှိနရောမှ ဒူးထောကျခါ နောကျတဈမြိုးတဈဖုံ လုပျဖို့အတှကျ ပွငျဆငျနဆေဲ အရိုငျးမလေး သဲသောငျပွငျကို ဖနှငျေ့ဖွငျ့ဖိတှနျး လိုကျသညျ။ သူမ၏ကိုယျလေး လြှောကနဲ မသံဇီ ၏ အနားမှ ရှသေို့တှားသှားသညျ…လီးကွီးမှာလညျး သူမ ၏ အဖုတျလေးထဲမှ ပွလှတျ…ဗှတျ … ဆိုသညျ့ မွညျသံနဲ့အတူ ကြှတျလှတျ ထှကျသှားရပွနျသညျ။ အရိုငျးမလေး လူးလဲထ လိုကျသညျ။ သောငျပွငျပျေါ၌ ထောငျထားသော ဝါးကညျြတောကျကို လှမျးယူ၍ တဈငုံနှဈငုံမြှ စိမျရကေို မော့ သောကျလိုကျ၏။ သူမ၏ ဝတျလဈစလဈ အနအေထားဖွငျ့ လှုပျရှားနပေုံမှာ တဈမြိုးကွညျ့ကောငျးနသေဖွငျ့ မသံဇီ တဈခှနျးမြှ စကားမဟဖွဈဘဲ ငေးမောကွညျ့ရှုနလေိုကျ၏။ နဘေယျအခြိနျက ဝငျသှားပွီး …လ ထှကျလာ သညျပငျ သတိမမူမိ…ယခုမှပငျ မသံဇီ ပတျဝနျး ကငျြကို သတိထားလိုကျမိ၏။ ပတျဝနျး ကငျြ၌ ပိုးပရဈတို့မွညျသံမှ အပ ပကတိတိတျဆိတျနသေညျကို သတိထားလိုကျမိသညျ။ ဆကျရနျ.. ပွီး…အရိုငျးမလေးအား ပွနျကွညျ့လိုကျသညျ။
အရိုငျးမလေးသညျ နိ့ဘတျလတျကွီးဖွငျ့ ဒူတုတျ၍ ဖနှောငျ့နှဈဘကျပျေါ ဖငျခုထိုငျနသေညျကို လရောကျအောကျ၌ ဘေးတိုကျတှမွေ့ငျနရေသညျ။ ပွညျ့ဖွိုးစုခြှနျနေ၍ ရှသေို့ ငေါငေါကွီးဖွငျ့ တုနျခါနသေော နိ့ကွီးနှဈလုံးမှာ လရောငျဖွငျ့ ထငျရှား စှာ တှမွေ့ငျနရေသညျ။ သူမ၏ သေးကငျြသော ခါးအောကျမှ တငျ ပါးကွီးမြား စှငျ့ကား၍ ဖနှောငျ့ ၏ ဘေးတဈဘကျတဈခကျြစီကို အိကနြသေညျ။ အရိုငျးမလေး..မော့သောကျနသေော ဝါး ကညျြ တောကျကိုခြ၍ ဒူးထောကျလကျြ အနထေားဖွငျ့ မသံဇီ ရှိရာသို့ တရှရှေ့ေ့ တိုးကပျလာသညျ။ ပွုံးခြိုရှငျပွနသေော သူမ၏မကျြနာ…စိမျရညျကွောငျ့လား မသိ နီရဲနသေညျဟု မသံဇီ ထငျမိသညျ ဝါးကညျြတောကျကို မိမိအား လှမျးပေးနသေညျ့ အရိုငျးမလေးအား တဈခကျြ စူးစူးဝါးဝါး စိုကျ ကွညျ့ရငျး စိမျရညျကို မော့သောကျ လိုကျသညျ။ ဝှူး….ပူနှေးရှတ ခြိုမွိနျသော စိမျရညျ လညျ ခြောငျးတဈလြောကျ လြှောကနဲ ဆငျးသှားသညျနှငျ့ နားထငျပါ ရငျးမြား ထူပူသှားခါ ပငျပနျးနသေမြှ အမောပွခေါ ခန်တာကိုယျတဈခုလုံး ထကွှလနျးဆနျးပွီး ကာမ ဆန်ဒတှေ တဟုနျထိုး တကျကွှလာ ရလတေော့သညျ။ ထောကျထားသော ဒူးမြားပျေါ လကျနှဈဘကျထောကျပွီး မိမိအား ရှငျပွုံးကွညျလငျစှာ မော့ကွညျ့ နသေော အရိုငျးမလေးကို မသံဇီ ငုံ့ကွညျ့လိုကျရငျး..ဝါးကညျြတောကျကို သဲသောငျပွငျပျေါ ထောငျထားလိုကျသညျ။ အရိုငျးမလေးကို ငုံ့၍ လကျမောငျးနှဈဘကျမှ ဆှဲမလိုကျသညျ …အရိုငျး မလေး အလိုကျသငျ့ ကွှ၍ပါလာသညျ။
မကျြနာခငျြးဆိုငျ မတျတပျရပျမိပွီ ဆိုမှ မသံဇီ .. သူမအား ခါးမှကိုငျဆှဲ၍ နှုတျခမျးနှဈလှာကို ဖိကပျနမျးစုပျလိုကျ၏။ လကျမြားကလညျး သူမ၏တငျပါးကွီး မြား ကို ဆုပျခပြှေတျသပျနေ၏။ အရိုငျးမလေး ခွဖြေားထောကျ ခါးကော့ ရငျလေး မောကျကွှလာသညျအထိ မသံဇီ၏ အနမျးမြား အောကျမှ တလူးလူး တ လှနျ့လှနျ့နှငျ့ရှိနရှောတော့သညျ။ ” ဟှနျး … ဟှနျး …အငျး …ဟငျ့ … ဟငျ့ .. ” သှားလေးမြားဖွငျ့ နိ့သီးခေါငျးလေးကို မနာ့တနာ ဖိကိုကျပေးလိုကျတော့ အရိုငျးမလေး ထှနျ့ထှနျ့ လူးရငျး နှုတျဖြားမှ မပီဝိုး ဝါး ငွီးတှားနရေလတေော့သညျ။ မသံဇီ ..သူမကို အားပါးတရ နမျးရှိုကျ ပှတျသပျဆုပျခပြွေီး..သူမကို သောငျပျေါ၌ လေး ဘကျထောကျစလေိုကျသညျ။ အရိုငျးမလေး လရောငျအောကျ သဲသောငျပွငျပျေါမှာ ဒူးလေးခပျကားကားထောကျ ခါးလေးကော့ ဖငျလေး နောကျပဈလိုကျ သဖွငျ့ ဖငျတုနျကွီးမြားအောကျ ပေါငျနှဈလုံးကွားမှ စောကျဖုတျကလေးမှ ပွူးပွူးပွဲပွဲလေးသာ ထှကျလာခါ ..လိုးပါတော့ … ဆိုမယောငျ မသံဇီအား ဖိတျချေါနပေေ၏။ မသံဇီ .. သူမ၏ခွနှေဈခြောငျးအကွား အနတေျော နရောယူ၍ မကုနျးမကှပုံစံဖွငျ့ သူ၏ သံခြောငျး တမြှ ကွီးထှားမာ ထနျနသေော လီးကွီးကို အရငျးမှကိုငျခါ အရိုငျးမလေး၏ စောကျခေါငျးဝတှငျ တထေ့ောကျလိုကျပွီး သူမ၏ ခါးကို လကျနှဈ ဘကျဖွငျ့ဆှဲကိုငျ၍ အားဖွငျ့ဖိဆောငျ့ ခလြိုကျသညျ။
”ဗွဈ …ဒုတျ ..အား ..” စောကျဖုတျ နှုတျခမျးသားကွီးမြား မသံဇီ၏ လီးကွီးနှငျ့အတူ စောကျခေါငျးဝ အတှငျးသို့လိပျဝငျ ခြိုငျ့ခှကျသှား လသေညျ။ ယငျးအခြိနျတှငျ ပွညျ့ဖွိုးတငျးမာ စှငျ့ကားနသေော သူမ၏ တငျပါးနှဈ ဘကျ တုံကနဲ..တုံကနဲ လှိုငျထ၍သှားသလို နိ့ကွီးနှဈ ဘကျမှာလညျး ရှနေ့ောကျဘယျညာ ရမျးခါ ၍ နသေညျ။ မသံဇီ ..ရမျးခါနသေော သူမ၏ နိ့ကွီးမြားကို လှမျးကိုငျဆှဲယူရငျး အဆကျမပွတျ လိုးဆောငျ့နပွေနျသညျ။ ”စှတျ …စှတျ …ဗွဈ …ဖတျ ဖတျ ..ဒုတျ …” ”ဗွဈ ..အငျ့ …အငျး …အိုး ….ဟား ….. အငျ့ .. ဟငျ့ ..” အရိုငျးမလေး နှုတျဖြားမှ ငွီးငွူရငျး မသံဇီ၏ လိုးဆောငျ့ခကျြမြား အလိုကျ မိမိ၏ဖငျကွီးကို နောကျ သို့ဆုတျကော့ ပေးလိုကျ သညျ ။ မသံဇီး၏ ပွငျးထနျသှကျလကျသော လိုးဆောငျ့ခကျြမြားကွောငျ့ အရိုငျးမလေးမှာ မသံဇီ စှဲအောငျကောငျးစပွေနျရာ သုတျရမြေားကို တဖွငျးဖွငျး ပနျးထုတျလိုကျရ သညျ ။ စောကျဖုတျအတှငျးမှ ယိုစိမျ့စီးကလြာသော အရညျမြားမှာ စောကျစလေ့ေး ကို ရီးလေးခို တှယျရငျးမှ သောငျပွငျပျေါသို့ တဈစကျခွငျး ခုနျဆငျးကကြုနျရပွနျလေ၏။ လီးကွီး၏ အရှိနျကမသေ …သားအိမျရငျးထိအောငျ တဒုတျဒုတျ တဘှတျဘှတျ မွညျအောငျ အသံ ကွီးမြားမွညျအောငျ ဆကျ တိုကျဆောငျ့လိုးနသေညျ။
”ဘှတျ ..ဘှတျ …ဖှတျ …ပွှတျ …ဘူ ..” ”အဟိ …ခဈ ခဈ …အငျ့ …ဟီး …ရှီး” စောကျခေါငျး ကယျြလာသညျနှငျ့အမြှ လဝေငျမှုပိုလာပွီး လီးကွီးကို ဆှဲနှုတျလိုကျတိုငျး အီးပေါကျ သကဲ့သို့သော အသံကွီး မြား ထှကျလာလသေညျ။ မသံဇီ နောကျဆုံးအားကုနျ ဆောငျ့လိုကျပွီး … အရိုငျးမလေး၏ စောကျခေါငျးဝသို့ သုတျရမြေား ကို ပနျးထဲ့လိုကျသညျ။ ထို့နောကျ သုတျရမြေား ဖွငျ့ စိုရှဲနသေော လီးကွီးကို စောကျဖုတျထဲမှ ဖွေးဖွေးခွငျး ဆှဲထုတျ ခြှတျ လိုကျသညျ။ ”ဘူ …ဘှတျ …ဘှ …ဗှ” ”ဟီး …ဟိ …ခဈ ခဈ …ဟားဟား ..” မတိုငျပငျလိုကျရပါပဲနဲ့ နှဈယောကျသား ပွိုငျတူရယျမောမိလိုကျသညျ။ လီးကွီး ဆှဲခြှတျလိုကျမှ လမြေားပွနျအံသညျ့ အသံ က အီးပေါကျသညျ့အသံ့သဖှယျ တဘူဘူ…တဗှဗှ ဖွဈနသေမို့ … သညျ့နှယျ ရီမောလိုကျကွခွငျး ပငျဖွဈသညျ ။ ခဏအကွာ…အားပါးတရ ရီမောပွီိး အရိုငျးမလေး သုတျကနဲ နရောမှ ထပွေးသှားသညျ။ မသံဇီ … အမှတျတမဲ့မို့ လှမျးမ ဆှဲဖွဈ … ”ဗှမျး …..” အရိုငျးမလေး…မသံဇီ အနားမှ ပွေးထှကျ၍ ခြောငျးရထေဲသို့ ခုနျခလြိုကျသညျ။ ရဈေရပေေါကျ မြား ဖှာကနဲလှငျ့စငျ ကုနျ သညျ….မသံဇီ သူမကို လှမျးကွညျ့လိုကျသညျ. ရှနျးပကျြတဲ့ လရောငျ အောကျမှ ရကေူးနသေညျမှ ဖြံမလေးသဖှယျ…သှကျ လကျလှနျး လှပလှနျးလှသညျမို့…သူ ငေး မော ကွညျ့ရှု နမေိရပွနျသညျ ….။ ပွီး။
လ က်တွေ့ ပို့ ချ သူ
အပျိုတွေလောက် မိုက်လား ဟင်